မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများနေ့ ဘာကြောင့် ကျင်းပသင့်သလဲ
ဗိုလ်ကြီးဟောင်း ၀င်းဗိုလ် သေဆုံးခဲ့သည့် မော်လမြိုင်ထောင်။ အာဏာပိုင် ၂၇ က ရိုက်နှက်သဖြင့် သေဆုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် (ဓာတ်ပုံ - Joinai)
"- - - ကလေးစစ်သား နှစ်ဦး လိင်တူချင်း ဆက်ဆံခံရခြင်းကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သားကောင်း ပီသ၏။ မျိုးချစ်စိတ်ကောင်း ပိုင်ဆိုင်သူလည်း ဖြစ်၏ - - - "
နှစ်စဉ် သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ကို 'မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများနေ့' Burma Prisoners’ Day (BPD) အဖြစ် ကျင်းပသင့်၏။ ၂ဝဝ၄ ခုနှစ်မှ စတင်၍ မော်လမြိုင် အကျဉ်းထောင်အတွင်း၌ နှစ်စဉ် ကျင်းပခဲ့၏။ ကျင်းပရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာ ၂၆.၈.၂ဝဝဝ ရက်နေ့ ည ၇း၃ဝ နာရီအချိန်တွင် မော်လမြိုင်ထောင် ကြိုးတိုက်အတွင်း၌ ထောင်အာဏာပိုင် ၂၃ ယောက်သည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား တစ်ဦး ဖြစ်သည့် ကိုဝင်းဗိုလ်အား နောက်ပြန် လက်ထိပ်ခတ်လျက် လည်ပင်း နင်းပြီး မသေမချင်း ရက်စက်စွာ ရိုက်သတ်ခဲ့ကြသည်။
ကိုဝင်းဗိုလ်သည် တပ်မတော်သား ဗိုလ်ကြီးဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်၏။ မည်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီဝင်မှ မဟုတ်၊ ဝါရင့် နိုင်ငံရေးသမားလည်း မဟုတ်၊ မည်သည့် လက်ဝဲ လက်ယယ နိုင်ငံရေး အယူအဆကိုမှ ဆုပ်ကိုင်ထားသူလည်း မဟုတ်။ တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုး အတွက် အကျိုး ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မည့် အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေး ကိစ္စနှင့် ၂ဝဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် အကျဉ်းသားများ အားလုံး လွတ်မြောက်ရေး အတွက် ဆရာတော် သံဃာတော်ကြီးများ ထံမှ သြဝါဒ မေတ္တာရပ်ခံစာ တစ်စောင်ကို န.အ.ဖ စစ်အစိုးရ အာဏာပိုင်များထံသို့ ဆောင်ယူ ပေးပို့သည့် ပြစ်ဒဏ်ဖြင့် ထောင် ၂၁ နှစ် အပြစ်ပေး ခံရခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။
န.အ.ဖ ၏ စစ်ဖိနပ်အောက်ဝယ် ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး များစွာကို နင်းချေ ဖျက်ဆီးခံနေရ၏။ လူသားချင်း စာနာစိတ် ကင်းမဲ့စွာ တရားလက်လွတ် ပြုကျင့်မှုများသည် ပြည်သူ သန်းပေါင်း ၆ဝ ကျော် အတွက် အနာဂတ် ဆိုသည်မှာလည်း ရှာမရနိုင်အောင် ဖြစ်နေရ၏။ အကျဉ်း ထောင်အတွင်း၌ အကျဉ်းသားများကို မတရား ရိုက်နှက်ခြင်း၊ အလုပ်ကြမ်း ခိုင်းခြင်း၊ ရဲဘက် ပို့ခြင်း၊ စစ်ပေါ်တာ အဖြစ် အသုံးပြုခြင်း၊ ကျန်းမာရေး အတွက် ဆေးဝါး လုံလောက်စွာ ကုသမှု မခံယူရခြင်း၊ အစားအစာကို မသေရုံ တမယ် ကျွေးခြင်း... အစရှိသည့် မတရားမှုများကို န.အ.ဖ လက်ပါးစေ ဖြစ်သည့် ထောင်အာဏာပိုင်များသည် ရက်စက်စွာ ကျူးလွန်နေကြ၏။
ထိုသို့ အစဉ်မပြတ် ကျူးလွန်နေသည့် မတရား ဖမ်းဆီးမှုများ၊ ဥပဒေမဲ့ ပြုမှုများ၊ ဖိနှိပ်မှုများကို ကမ္ဘာ့ပြည်သူ သန်းပေါင်း များစွာသည် သိရှိ လာပြီး စာနာ ထောက်ထားလာစေရန် အတွက် နိုင်ငံတကာမှ အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေး တောင်းဆိုချက် တစ်ဆင့်ထက်တစ်ဆင့် မြှင့်တင်၍ ပြည်တွင်းမှ အထူးသဖြင့် အကျဉ်းထောင်များ အတွင်းမှ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုများ စတင်နိုင်ရန်နှင့် နောင်လာမည့် အနာဂတ်တွင် စစ်အာဏာရှင် စနစ် ခေါင်းမော့ မလာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကိုဝင်းဗိုလ် ကျဆုံးသည့်နေ့အား 'မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းသားများနေ့' အဖြစ် ကျင်းပသွားရန် မော်လမြိုင် အကျဉ်းထောင်ရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများက တညီ တညွတ်တည်း အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
'မြန်မာနိုင်ငံ အကျဉ်းသားများနေ့' ကျင်းပရခြင်းသည် ...
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း လက်ရှိ ဖြစ်ပေါ်နေသည့်
(၁) မတရား ဖမ်းဆီးမှုများ ရှိနေခြင်း
(၂) ဥပဒေနှင့် အညီ တရား စီရင် စစ်ဆေးမှုများ မရှိခြင်း
(၃) အကျဉ်းသားများ၏ အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံး နစ်နာနေခြင်း
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု၊ ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်မှုများရှိရာ ၎င်းတို့ကို ကာကွယ် စောင့်ရှောက်သွားနိုင်ရန် အတွက် ဖြစ်သည်။ ကိုဝင်းဗိုလ်သည် အမှန်တရားဘက်မှ ရဲရင့်ပြတ်သား ခိုင်မာစွာဖြင့် အသက်စွန့် ရပ်တည်သွားသည့် သူရဲကောင်း တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ စစ်ပြေးမှုဖြင့် ထောင်ကျနေသည့် အရွယ် မရောက်သေးသည့် ကလေးစစ်သား နှစ်ဦး လိင်တူချင်း ဆက်ဆံခံရခြင်းကို ဆန့်ကျင် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့သူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ တပ်မတော်သားကောင်း ပီသ၏။ မျိုးချစ်စိတ်ကောင်း ပိုင်ဆိုင်သူလည်း ဖြစ်၏။ န.အ.ဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေလို မျက်ကန်းမျိုးချစ်ဝါဒီ မဟုတ်။ အပြောတစ်မျိုး အလုပ်တစ်ခြားဖြင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား ရှာသူ မဟုတ်။ န.အ.ဖ၏ မတရား ဖမ်းဆီးခြင်း ခံနေရသည့် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ပီသစွာဖြင့် ဘဝတူ အကျဉ်းသားများ၏ အကျိုးကို အသက်စွန့်၍ သယ်ပိုး ထမ်းရွက်သွားသူ အဖြစ် ကမ္ပည်းတင်ထိုက်၏။
လူမဆန်မှုနှင့် မင်းမဲ့စရိုက် ကြီးစိုးနေသည့် န.အ.ဖ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် လက်တံများစွာကို ဖြန့်ကျက်ထား၏။ သတင်းပေး၊ စွမ်းအားရှင်၊ ကြံ့ဖွံ့၊ မိ/စောက်၊ အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်း၊ စစ်ဘက်၊ ရဲဘက် လက်မရွံ့ ပါးကွက်သားများဖြင့် မြန်မာပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးအား အကြောက်တရားများ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပိုမို ကျယ်ပြန့်လာစေရန် စနစ်တကျ စီမံကိန်းများ ချ၍ ကျူးလွန်နေကြသည်။ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈-မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်ကြသည့် မင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ မင်းဇေယျာ၊ အံ့ဖွယ်ကျော်၊ ဂျင်မီ ... အစရှိသည့် လူငယ်နိုင်ငံရေးသမားများ၊ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် အခြား ရဲဘော် ရဲဘက်များကိုလည်း မတရား ဖမ်းဆီး၍ ပုဒ်ထီးပုဒ်မ အမျိုးမျိုး တပ်ပြီး နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ထား၏။
န.အ.ဖ၏ နိုင်ငံရေး လမ်းပြမြေပုံအရ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပတော့မည် ဖြစ်၏။ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသည် တရားမျှတမှုလည်း လုံးဝ (လုံးဝ) မရှိ။ အားလုံး ပါဝင် ဆောင်ရွက် ယှဉ်ပြိုင် ရွေးချယ်ခွင့် မရှိသည့် ရွေးကောက်ပွဲကြီး ဖြစ်နေ၏။ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ် မေလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသားများကို အကျဉ်းသားများ သဖွယ် အဓမ္မအမိန့်ပေး ခြိမ်းခြောက် အတည်ပြု ထောက်ခံခိုင်းထားသည့် နာဂစ် အခြေခံ ဥပဒေအရ စစ်သား တစ်မတ်သား အဆင့်ထက် ပိုပြီး စစ်သား တစ်ကျပ်သား လိုချင်သည့် အတွက် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ရန် န.အ.ဖ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များသည် ဘောင်းဘီ ချွတ်လိုက်ကြ၏။ တောင်ရှည်ပုဆိုး ဝတ်ပြီး ခေါင်းပေါင်းစ တလူလူ လွှင့်နိုင်ရန်အတွက် သူတို့၏ လက်ကိုင်တုတ် ကြံ့ဖွံ့အသင်းကြီးအား နိုင်ငံရေးပါတီ အဖြစ် ပြောင်းလဲ ဖွဲ့စည်းလိုက်သည်။
န.အ.ဖ စစ်အာဏာရှင်တို့သည် နိုင်ငံရေးဓားပြမှုကြီးကို ပြောင်ပြောင်တင်းတင်း ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းဖြစ်၏။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ၊ ကျောင်းသားများ အစရှိသည့် နိုင်ငံရေး အစဉ်အလာ ရှိသူများအား မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လောကမှ အပြီးတိုင် ဖယ်ထုတ်နိုင်ရန် ကလိန်ကကျစ် နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကြိုးပမ်းနေကြ၏။
ထိုသို့ ပြုကျင့်နေခြင်းတို့သည် လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာဥပဒေ စံချိန် စံညွှန်းများနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ ဒီမိုကရေစီ နည်းလမ်းကျ မဟုတ်ခြင်း၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို ကျူးလွန်နေခြင်းများကို ဆက်တိုက် ပြုကျင့်နေကြသဖြင့် ... သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်သည့် 'မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများနေ့' အခါသမယတွင် ကျဆုံးသွားသည့် ကိုဝင်းဗိုလ်နှင့်တကွ လက်ရှိ အကျဉ်းခံဘဝတွင် ရောက်ရှိနေသည့် မြန်မာ နိုင်ငံသား ပြည်သူသန်းပေါင်း ၆ဝ ကျော် ကိုယ်စား န.အ.ဖ စစ်အာဏာရှင်များကို နိုင်ငံတကာမှ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်များ နည်းတူ ၎င်းတို့ ကျူးလွန် ခဲ့သည့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများကို တရားစီရင်နိုင်ရန် အတွက် ကုလသမဂ္ဂက ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ် ဖွဲ့စည်းသည့် စုံစမ်းရေး ကော်မရှင် တစ်ရပ်ကို အမြန်ဆုံး လက်တွေ့ အကောင်အထည် ဖော်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ စေလွှတ်ပေးပါရန် တိုက်တွန်း နှိုးဆော်လိုက်ပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, August 28, 2010 Links to this post
စစ်အာဏာရှင်တိုက်ချက်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ
28.8.2010 ရက်နေ့နံနက်ပိုင်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မကွေးမြို့ များတွင် ပြည်တွင်း ပြည်ပ နိုင်ငံရေးအင်အားစု အဖွဲ့ (17)ဖွဲ့ပူးပေါင်းဖွဲ့ စည်းထားသော စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေး လူထုလုပ်ရှားမူကော်မတီဧ် ပြည်တွင်းပြည်ပလူပ်ရှားမှုအဖြစ် မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ကြင်းပပြုလုပ်မဲ့ 2010 ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ေ၇ွးကောက်ပွဲဝင် နိုင်ငံရေးပါတီများမှ သပိတ်မှောက်ကြဘို့ပြည်သူုကိုယ်စားပြုကြားဖြတ်အစိုးရ ဖွဲ့ စည်းကြဆိုတဲ့ စာသားပါ Free Burma စာသားနဲ့မြန်မာပြည်မြေပုံပါ ပို့ စ်ကဒ်တွေကို ရန်ကုန်မြို့ မှ သီရိမဂ်လာဈေး၊ စံပြငါးဈေး၊လှိုင်သာယာမီးခွက်ဈေး၊ လမ်းမတော် သံဈေး၊ ရန်ကုန်အခြေစိုက်နိုင်ငံေ၇းပါတီများရဲ့ ရုံးခန်းများ မန္တလေးမှာ မန္တလေးဈေးချို နဲ့ မဟာမြတ်မုနိဘုရားအနီး ၊ မကွေးမှာ မကွေး-မင်းဘူးသွားကားလမ်းနဲ့ဂွေးချိုလမ်းခွဲတို့ မှ ဖြန့် ဝေခဲ့ ကြောင်း ၊ ဖြန့် ဝေရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် သက်စိုးရှည်စေပြီး သူတို့ ရဲ့ ကိုယ်စားပြု ကြံ့ ခိုင်ရေးပါတီ အနိုင်ရရှိေ၇းဖြစ်ပေါ်စေမဲ့2010 ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေ ထုတ်ပြန်ပြီး ကျင်းပမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ညီညွတ်စွာ ကန့် ကွက်သပိတ်မှောက်ကြဘို့ လှုံ့စော်ဖြန့် ဝေခဲ့ ကြောင်း လုံခြုံ ရေးအရ ပို့ စ်ကဒ်များကို ရန်ကုန်- မန္တလေးမှာပြနေတဲ့ဟတ်ထ်ိတယ်ရုပ်ရှင် လက်ကမ်းကြော်ညာများဖြင့် ပူးတွဲ ဖြန့် ဝေခဲ့ ကြောင်း ယခုလှုပ်ရှားမှုကိုအမေရိကန်နိုင်ငံ ဖို့ ဝိန်း မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများမှလဲဖို့ ဝိန်းမြို့ တွင် တချိန်ထဲပြုလုပ်ခဲ့ ကြောင်း။
စစ်အစိုးရ ရာဇသံကို ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO ပယ်ချ
နယ်ခြားစောင့်တပ်ဖွဲ့စည်းရေးကို လက်မခံရင် မတရားအသင်း ကြေညာမယ်ဆိုတဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ ရာဇသံကို ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) က ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။ နိုင်ငံရေးကို အရင် ဖြေရှင်းလိုတယ်လို့လည်း သူတို့က ပြောပါတယ်။ ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် နူးပန်က သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။
ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO အနေနဲ့ လက်နက်ချမှာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ဒီကနေ့ပဲ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလို့ KIO အဖွဲ့ ဒုတိယ နိုင်ငံခြားရေး တာဝန်ခံ ဂျိမ်းစ် လွန်းဒေါင်က ပြောပါတယ်။
“ဒီနေ့ဟာ ကျနော်တို့ KIA တဖွဲ့တစည်းပဲ အဲဒါ ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ပထမ ရယူပြီးတော့မှ အဲဒီပေါ်မှာ မူတည်ပြီးတော့မှ ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်တယ်။ အခုမှ လက်နက်ချပါ ဆိုရင်တော့ ဒါက လက်တွေ့မကျဘူး။ ကျနော်တို့က အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး လုပ်ထားတဲ့အခါမှာ သဘောတူထားတဲ့ နှစ်ဖက်စလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ကို ကျနော်တို့က တန်ဖိုးထားစွာနဲ့ ဆက်လက် လုပ်သွားတာပဲ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ယုံကြည်တာက သူတို့လည်း အဲဒီသဘောတူညီချက်ကို လက်တွေ့ လုပ်သွားကြလိမ့်မယ်လို့ ယုံကြည်လျက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီ KIO အစည်းအဝေးကနေ ဒါကိုလက်မခံဘဲနဲ့ ဆက်လက်ပြီးတော့မှ လုပ်သွားတာဖြစ်တယ်လို့ ကျနော် အဲဒါပဲ ပြောချင်ပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်ရက် ကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ မြန်မာအစိုးရက KIO အဖွဲ့၊ ၀အဖွဲ့၊ မုန်းလားအဖွဲ့ နဲ့ မွန်ပြည်သစ် အပါအ၀င် ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အပစ်ရပ် အဖွဲ့တွေကို စက်တင်ဘာ ၁ ရက်နေ့ နောက်ဆုံးထားပြီး အဖြေပေးဖို့ ရာဇသံပေးခဲ့တာပါ။ အသွင်ပြောင်းဖို့ သဘောမတူဘူး၊ လက်နက် မချဘူးဆိုရင် တရားမ၀င်အသင်းအဖြစ် သတ်မှတ်မယ်လို့လည်း ခြိမ်းခြောက်ခဲ့တာကို ခုလို ညီလာခံမှာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
KIO အနေနဲ့ နိုင်ငံရေး ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း မရှိသေးသမျှ ကာလပတ်လုံး လက်နက် အပ်နှံခြင်း လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။ အခု ကျင်းပနေတဲ့ ညီလာခံဟာလည်း၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မသက်ဆိုင်ကြောင်းနဲ့ မြန်မာစစ်အစိုးရ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပါဝင်မှာ မဟုတ်သလို ကန့်ကွက်ခြင်းလည်း မရှိဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီလို ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ KIO ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ လိုင်ဇာ ဌာနချုပ် အပါအ၀င် KIO ရှေ့တန်းနယ်မြေတွေမှာ လုံခြုံရေးတွေ တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ချထားလိုက်တယ်လို့ KIO နဲ့ နီးစပ်တဲ့ လိုင်ဇာ ဒေသခံတယောက်က ပြောပါတယ်။
“လူဝင်လူထွက် နည်းနည်း ကြီးကြပ်လိုက်တာ ပြီးရင် ဒီဂိတ်တွေမှာရော ဒီအ၀င်အထွက် စာရင်းတွေစစ်တယ် ပြီးရင် လက်မှတ်တွေ ထိုးခိုင်းတယ် မှတ်ပုံတင် နံပါတ်တွေကအစ အကုန်လုံးရေးခိုင်းတယ် ပြီးရင်လိုင်ဇာမှာလည်း နေရာတိုင်းမှာပေါ့ အဆောက်အဦးလွတ်တွေ လမ်းဆုံလမ်းခွနေရာ တကာ ခြုံကျိုခြုံကြား နေရာတကာ အဲလိုမျိုး လုံခြုံရေးတွေ အစောင့်ချ ထားတာပေါ့နော်။ အဲဒီလိုမျိုး လုံခြုံရေးတွေ နည်းနည်း တင်းကျပ်ထားတယ်။ ခါတိုင်းထက်နည်းနည်း ထူးထူးခြားခြား တင်းကျပ်ထားတာတွေ တွေ့ရတယ်။ သူတို့စစ်တာ လူဝင် လူထွက် စစ်တယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ အပြင်က ဧည့်သည်တွေကို ပေါ့နော်။ လိုင်ဇာမြို့ခံ လိုင်ဇာအိမ်ထောင်စုရှိ လိုင်ဇာဒေသခံတွေ ကျတော့ ဘာမှကိစ္စမရှိဘူး။ သွားသွားလာလာ အဆင်ပြေတာပေါ့နော်။ စစ်ဆေး မေးမြန်းခြင်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အပြင်က အ၀င်အထွက် တွေကိုကျတော့ နည်းနည်း သူတို့ စစ်ဆေးတာတွေ၊ ပြီးရင် အိတ်တွေဘာတွေ ဖွင့်ခိုင်းတာတွေ ဆိုင်ကယ်တွေစစ်တာတွေ ရှိတာပေါ့။”
အခုလို ဖိအားတွေ များလာနေတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ KIO အဖွဲ့ကြီးက သူရဲ့ သက်တမ်း ၄၉ နှစ် အတွင်းမှာ ပထမဆုံး အကြိမ်အဖြစ် ပါတီညီလာခံကြီးကိုလည်း ဒီကနေ့ စတင် ကျင်းပနေပါတယ်။ဒီညီလာခံမှာ KIO တိုင်းဒေသအဆင့် ပါတီ သဘာပတိနဲ့ အတွင်းရေးမှူးတွေ၊ တိုင်းဒေသအသီးသီးက ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေ ၁၀၀ ကျော် တက်ရောက်နေပါတယ်။
ခုကျင်းပနေတဲ့ ညီလာခံကနေ KIO အဖွဲ့ အနေနဲ့ အနာဂါတ်မှာ ဘယ်လို ရပ်တည်သွားမယ် ဆိုတာကို မကြာသေးခင်က ရယူထားတဲ့ လူထု သဘောထားတွေကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။KIO နယ်မြေမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကချင်ပြည်သူတွေကတော့ အခြေအနေတွေ တင်းမာလာပြီး တိုက်ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်လာမှာကို စိုးရိမ်နေကြ ပါတယ်။
နအဖတပ်ခေါင်းဆောင် များ စစ်ရာထူးစွန့် NLD ပါတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဟောင်း သူရ ဦးတင်ဦးပြောသောရုပ်သံအင်တာဗျူး
စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေ နုတ်ထွက်တယ်၊ ရာထူး အပြောင်းအလဲသတင်းကအထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးတင်ဦးက ပြော
စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေ နုတ်ထွက်တယ်၊ ရာထူး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးလောကကလည်း အမျိုးမျိုး ဝေဖန် သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ ဘယ်လို သုံးသပ်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိသလဲ ဆိုတာ အပြည့်စုံကိုတော့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတဲ့ မသင်းသီရိက တင်ပြထားပါတယ်။
ဒီအပြောင်းအလဲ သတင်းတွေက မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကထဲမှာ အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ NLD ပါတီရဲ့ ဒုတိယဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးတင်ဦးက ပြောပါတယ်။ သူစစ်တပ်ထဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အချိန် မဆလ ပါတီ ခေတ်ကတည်းက ဒီလိုပဲ စစ်ဝတ်ကနေ အရပ်ဝတ်တွေ ပြောင်းပြီး အာဏာကို ဆက်လက် ချုပ်ကိုင်ဖို့ ကြိူးစားခဲ့တာဟာ စစ်တပ်ထဲမှာ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် တခု ဖြစ်တယ်လို့လည်း သုံးသပ်ပါတယ်။ မဆလခေတ်နဲ့ မတူတဲ့အသွင်ဆိုလို့ အရင် တပါတီစံနစ်နဲ့ အခုတော့ ပါတီစုံရယ်လို့ အမြင်ပြထားတဲ့ အချက်လေးတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း ထောက်ပြပါတယ်။
“ဒါက ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ကျနော်တို့ မဆလ၊ ကျနော်ရှိတုန်းကလည်း ဒီပုံစံပဲဗျာ။ ဒီပုံစံပါပဲ။ အဲဒီတုန်းကလည်း ဦးနေ၀င်းတို့၊ ဦးစန်းယု တို့၊ နောက်ပြီးတော့ တိုင်းမှူးတွေ တော်တော်များများ ထွက်တယ်။ ကျနော်တယောက်တည်း တပ်ကို ကိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တာပဲ။ ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကတော့ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာ ယူနီဖောင်းတွေ ချွတ်လိုက်ကြတာပဲ။ အဲဒီလိုပဲ ကျနော်တို့တုန်းကလည်း ရှိခဲ့တာပဲ။ ဟိုတုန်းကတော့ တပါတီပေါ့ဗျာ။ ရွေးချယ်ရမယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို ဒေသတွေက သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက် အဲဒါ အရွေးခံတဲ့အခါကျတော့ မဲပုန်းထောင်ပြီးတော့ အမှားအမှန် ပေးရတာပါပဲ။ အခုဟာကတော့ အရွေးခံပြီးတော့ မဲဆန္ဒနယ်မှာ တခြားသော ပါတီတွေနဲ့လည်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်တယ် ဆိုတဲ့သဘောအရတော့ ဖြစ်တော့ဖြစ်တာပေါ့။ ဒါပေမဲ့လည်း အခြား ယှဉ်ပြိုင်နိုင်တဲ့ ပါတီတွေ အတွက်ကတော့ သူတို့က တော်တော်ကို အခက်အခဲ အကျပ်အတည်းတွေနဲ့ အတားအဆီး အပိတ်အပင်တွေနဲ့ ဆိုတော့လည်း သူတို့ကတော့ မလွယ်ဘူးပေါ့။ တစည တို့ဘာတို့ကလည်း ဒါနဲ့ပတ်သက်တာကို သူတို့ သေချာတဲ့နေရာမှာ ယူထားပြီး ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာ ကြံ့ဖွံ့နံမည်နဲ့ ၀င်ပြီးတော့ တနည်းအားဖြင့်တော့ ဒါက တစည၊ ကြံ့ဖွံ့ ပါသွားတယ်။ အဲဒီလို အပေးအယူတွေလည်း လုပ်ကြပြီးတော့ သေချာအောင် လုပ်ကြတဲ့သဘောပါပဲ။ သူတို့ပဲဝင်၊ သူတို့ပဲ နိုင်၊ သူတို့သေချာလုပ်ပြီး သူတို့ပဲသွားမှာ။ ဒီပုံစံပါပဲ။ အဲဒီတော့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ဗျာ ရွေးကောက်ပွဲ မလုပ်ခင်ကတည်းက လူတွေရပြီးတော့ ဘယ်လို အောင်မြင်စွာဖြင့် ပြီးသွားကြမယ်လို့ ဆိုတာတွေကလည်း ထင်ထင်ရှားရှား သိနေတဲ့သဘောပါပဲ။ အဲဒါတွေ သေချာလို့လည်းပဲ အခုလိုထွက်ပြီး လုပ်ကြတဲ့သဘောပါ။”
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သူရ ဦးတင်ဦး ပြောပြခဲ့တာပါ။ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရက်တွေ မတိုင်ခင် စစ်တပ်ထဲ အပြောင်းအလဲတွေ ရှိမယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေ အစောပိုင်းကတည်းက အတော်လေးထွက်နေတာပါ။ ဒါ့ကြောင့် အခုထွက်လာတဲ့ သတင်းဟာ တရားမ၀င် စစ်တပ်အစိုးရကနေ တရားဝင် ရွေးကော်ပွဲကနေ တက်လာမယ့် အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်ရေးဆိုတဲ့ စစ်တပ်တွင်း စံနစ်တကျ ချမှတ်စီစဉ်ထားတဲ့ အဆင့်တွေကို တဆင့်ပြီးတဆင့် အကောင်အထည် ဖော်လာတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ မြန်မာပြည်ရဲ့ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေက သုံးသပ်ပါတယ်။
“ကျနော်ကတော့ သူတို့ အဲဒီလို ရာထူးက ထွက်လိုက်တယ်ဆိုရင် သူတို့ အရပ်သားဖြစ်သွားပြီ။ သူတို့ မျှော်မှန်းထားတဲ့ အရပ်သား အစိုးရမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင် ခေါင်းဆောင်ဖို့မှာ ဖြစ်သွားတယ်လို့ ယူဆရတာပေါ့နော်။ ကျနော် ထင်တာကတော့ အခု ရွေးကောက်ပွဲမှာကတော့ သူတို့ မှန်းထားတဲ့အတိုင်းပဲ သူတို့က အသာစီးရလိမ့်မယ်လို့ သူတို့ တွက်ပြီးပြီလို့ ယူဆရတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့် သူတို့လည်းပဲ ဒီရာထူးတွေကနေ ထွက်ပြီးတော့ အရပ်သားအစိုးရမှာ တာဝန်ယူဖို့ ပြင်ဆင်တယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်။”
ဦးသုဝေပါရှင်။ တခါ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီရဲ့ ဥက္ကှဌ ဒေါက်တာ သန်းငြိမ်းကနေ အခုသတင်းတွေအပေါ် ဝေဖန်သုံးသပ်ဖို့ အချိန်စောသေးတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ ဆိုတာက နံပါတ် (၁) မသိဘူးပေါ့။ ဒါက သိပ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေ့ါ။ ဒါကို အဲန်ကယ်လ်တို့က ခဏတော့ စောင့်ကြည့်ဦးမှ ဖြစ်မှာပေါ့နော်။ ကြိုပြီးတော့ ပြောဖို့ကတော့ လုံးဝ မရနိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒါတွေဟာ ဒီလို အချိန်အခါမျိုးမှာ သိပ်ကို delicate (အထိခိုက်မခံ) ဖြစ်တယ်လေ။ မှတ်ချက်ပေးဖို့ တော်တော် ခက်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လာမှာလဲ။ ဒါကို သေသေချာချာ လေ့လာပြီးမှပဲ ပြောတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။”
NDF ပါတီရဲ့ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာသန်းငြိမ်း ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
နအဖ စစ်အာဏာရှင် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ အပြောင်းအလဲ ပြုလုပ်
ယနေ့ နေ့လည် အထူး သတင်း တစ်ခုပါ..။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးတို့သည် လက်ရှိ စစ်ရာထူးများမှ နုတ်ထွက်ပြီး ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး နေရာ အားဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရမြင့်အောင်(ဒု)ချူပ် နေရာအားပေးအပ်ခဲ့သည်.။
အောင် မြင့်ဦး တို့လည်း ရာထူးမှ ယနေ့တွင်နှုတ်ထွက်သွားသည်.။
စစ်ရေးချူပ်အဖြစ်ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ စစ်ထောက်ချူပ်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ဝေလွင်၊ တင်အေးနေရာအား သိန်းဌေးတို့နေရာရယူကြောင်း သိရှိရပါသည်။
(1) Lieutenant General Ohn Myint (BSO 1, DSA intake 17)
(2) Lieutenant General Min Aung Hlaing (BSO 2, DSA intake 19)
(3) Lieutenant General Ko Ko (BSO 3, DSA intake 19)
(4) Lieutenant General Thar Aye (BSO 4, DSA intake 16)
(5) Lieutenant General Myint Swe (BSO 5, DSA intake 15)
(6) Lieutenant General Myint Hlaing (Chief of Air Defence, DSA intake 17)
(7) Lieutenant General Tin Aye (Chief of Military Ordnance, DSA intake 9)
(8) Lieutenant General San Sint (Military Appointment General
(9) Lieutenant General Soe Maung (Judge Advocate General)
(10) Lieutenant General Thein Htike (Inspector General
နေရာ အပြောင်းလဲ (၁၈) ဦးပြုလုပ်သည် ဟုသတင်းရရှိပါသည်.။ သတင်း အသေးစိတ်နှင့် နအဖ စစ်အာဏာရှင်များ၏ လူပုဂ္ဂိုလ် စာရင်းများ ကို ဆက်လက် တင်ပြ ပေးသွားမည်.။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Friday, August 27, 2010 Links to this post
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဦးဥာဏ်ဝင်းသို့ မှာကြားချက် (၉) ချက်
လူထုခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဦးဥာဏ်ဝင်းသို့မှာကြားချက်
၅။ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ အခုထွက်နေတဲ့ဥပဒေတွေကို နားလည်းရမယ်၊နားမလည်ပဲနဲ့မဲသွားထည့်ရင် ဘာမှအဓိပါယ်မရှိဘူး။
၇။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပက်သက်ပြီး သတင်းရယူခွင့် ၊သတင်းထုပ်ပြန်ခွင့် မရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကန့်ကွက်တယ်။
၈။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရေ၏၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်တယ် အဲ့ဒီကထွက်လာမယ့် သမ္မတကိုလွတ်တော်ကမလွမ်းမိုးနိုင်ဘူး သမတ ကပဲအားလုံးကိုလွမ်းမိုးချုပ်ကိုင်သွားမှာဖြစ်တယ်။
ပြိုင်ဘက်မရှိုစစ်အာဏာရှင် သက်သက် ဝင်ပြိုင်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကြီး
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည်ယခုလ ၂၀ ရက်နေ့က မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးတွင် ရုံးခွဲပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရုံးများအနက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် မြို့နယ်အဆင့် ၄၅ ရုံး၊ ခရိုင်အဆင့်လေးခုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ရုံးတစ်ရုံးလည်း ပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။
ပါတီမဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်း လုပ်ငန်းများကို သြဂုတ်လကုန်တွင် စတင်မည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လွှတ်တော်သုံးရပ် စလုံးတွင် ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းပါတီ၏ အလုပ်အမှုဆောင်တစ်ဦးက ပြောသည်။ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်း လွှတ်တော် သုံးခုစလုံးတွင် ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၄၅ ဦး တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အတွက် ၉၀ ဦး၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်အတွက် ၁၂ ဦး အပါအဝင် ရခိုင်နှင့် ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာ အမတ်နေရာအတွက် နှစ်ဦး ဝင်ရောက် အရွေးခံမည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားကြောင်း မြန်မာတိုင်း(မ်) ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်မည့် နအဖ စစ်အာဏာရှင် များရဲ့ မတရားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို “ဝ ”နယ်မြေမှာ လုပ်ခွင့်မပြု...
တောင်ဒဂုံမြို့ နယ်မှာ ကြံ့ဖွတ်တွေ နာရေးကူညီမှု ပေးမည်ဆိုပြီး ငွေပေးစည်းရုံးနေ.
မမှန်မကန် မတရားရရှိထားသော နိုင်ငံပိုင်ငွေများနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ဖို့ပြင်ဆင်နေသည့် မြို့တော်ဝန် အောင်သိန်းလင်းနှင့် ကြံ့ဖွတ် အဖွဲ့ဝင်များ..
သြဂုတ်လ (၂၃)ရက် နေ့က ထားဝယ်ချောင်သုဿန်နှင့် ကြည်စုသုဿန် လမ်းကြောင်းဖြစ်သော. တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှာ ကြံဖွတ်အဖွဲ့ဝင်များမှ.. ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးနေပါတယ်။ မဲဆွယ် စည်းရုံးပုံကတော့.. အိမ်မှာ သေဆုံးသူရှိလျှင် အလကား သဂြိုလ်ပေးမည် ဖြစ်ပြီး ...သေဆုံးလျှင်လည်း.. ကျပ်ငွေ သုံးသောင်း... ကိုလည်း ပေးမည်.. ဖြစ်ကြောင်း.. ပြောဆိုစည်းရုံးနေပါတယ်.။ စည်းရုံးပုံမှာ မိမိတို့ မဲရရှိရေးအတွက်သာ စဉ်းစားပြီး.. ရပ်ကွက်အတွင်း နေထိုင်နေသူများအား အတင်းသေခိုင်း ပုံပေါက်သည့် အတွက်ကြောင့် မင်္ဂလာမရှိကြောင်း... နာရေးအတွက် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးမလိုနှင့် အတင်းမဲဆွယ် အမြတ်ထုတ်နေကြောင်း.. ထို့အတွက်ကြောင့် ကြံ့ဖွတ်၏ ထိုသို့ မမှန်မကန် ငွေပေး စည်းရုံးလှုံဆော် နေမှုများအား ထားဝယ်ချောင်သုဿန်နှင့် ကြည်စုသုဿန် လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်က ပြည်သူများအား ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ ပြည်ပမီဒီယာများမှ ဖော်ထုတ်စေလိုကြောင်း ရေးသား ပေးပို့လာပါတယ်....။
တပ်ခရိုင် မဲ့ကဆာရွာနှင့် နန်တီရွာအကြားမှ မြန်မာအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုရက်ရက်စက်စက်သတ်ဖြတ်ထားတဲ့ လူသေအလောင်း..
ဒီလူသေလောင်းဟာ ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံ ၊တပ်ခရိုင် မဲ့ကဆာရွာ နှင့် နန်တီရွာ ရွာနှစ်ရွာရဲ့ကြားမယ်တွေ့တာပါ နှစ်ဆယ့်ငါးရက်နေ့ကကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်သတ်ပြီထားတာခြောက်ရက်ဝန်းကျင်လောက်ဘဲရှိ မယ်ထင်ပါတယ် ။သေနတ်ဒဏ်ရာသုးံချက် ၊ဓားဒဏ်ရာ နှစ်ချက်ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် သတ်ဖြတ်ခံထားရ
တဲ့ မြန်မာအမျိုးသားတဦးအား တွေ့မြင်ရတာပါ.။
ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ ဘယ်လိုိုလုပ်ကြမလဲ၊ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်လို့ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်ပြောကြမလဲ။ စဉ်းစား ကြည့်ပေတော့ ဗျာ၊ ကျွန်တော်ပြောပြမယ် လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ့်ငါးရက်လောက်က မိန်းကလေး တစ်ယောက်ပျောက်ဆုးံတယ်၊ မယ်ကုလွင်ရွာ ကလည်း လူငယ်တစ်ယောက်ပျောက်ဆုးံတယ် ၊ဒီကြားထဲမှာလည်း မုဒိမ်းကျင့်ခံရတာတွေကလည်း များမှများ မကြားချင်မှအဆုံး၊ ပါးရိုက်ခံရတာ၊ ချေးထောက်နဲ့ ကန်ခံရတာတွေကတော့ ပြောလို့မဆုးံ ၊မုဒိမ်းကျင့်တယ် ဆိုတာကလည်း အလုပ်ဆိုပြီတော့ ယားခင်းထဲခေါ်သွား ကောင်းမလေးကလှမယ၊် အယုတ်စွ အဆုးံ ရုပ်မချောရင်တောင်အသားလေးစိုစိုပြေပြေဆိုခေါ်သွားလိုက်တာဘဲ တောထဲကို ဗမာပြည်သားကလည်း မရှိလို့ငတ်လို့လာလုပ်စားတာဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေအများစု ဗမာပြည်သား အများစုကလည်း အရှက်နဲ့လူလုပ်လို့ မရတော့ဘူး ။
ဒီဘက်တစ်ခွင်မယ်က အရှက်တရားသာ ထားမယ်၊ရှိမယ်ဆိုရင်ထမင်းငတ်သွားမယ် ၊ခိုင်းတာလုပ်ကြွေး၊ပေးတာစား၊ပေးတာယူ ၊ငေါက်ရင်ခံ၊ဆူရင်ခံဘ၀- ဒါတွေဟာ ဒါတွေရဲ့တရားခံဟာ ဘယ်သူလည်းလို့ ပြန်တွေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အဓိကတရားခံ ကတော့အာဏာရူး စစ်ခွေးတစ်သိုက်ကြောင့် ဆိုတာ မိမိတို့ တွေးကော တွေးမိကြရဲ့လား။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ရှေ့ဆက်ပြီတော့ ဒီအတိုင်းဘဲ ဆက်လျှောက်နေကြမှာလား။
ဒီအတိုင်းသာ လျှောက်နေကြမယ် ဆိုရင် ဒီဘ၀ဆိုးတွေ ကနေ ဘယ်တော့မှ ရုန်းထွက်လို့ မရတော့ဘူး ဆိုတာ သဘောသာပေါက်လိုက်ကြပေတော့ ၊ပြဿနာအဓိက ဇစ်မြစ်ကိုလိုက်ပြီး ပြဿနာရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို သိပြီးဆိုရင် ကိုယ်က ဒီပြဿနာတွေထဲက နေရှောင်ထွက်ဖို့ ကကြိုးစားနေကြမယ့် အစား ဖောက်ထွက်ဖို့ ကြိုးစားတာပို ကောင်း မယ်လိုိုိုို့ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဘက်တွင် ဒီလိုလူသတ်မှုတွေ လူပျောက်ဆုးံနေတာတွေ အများကြီးပါလို့ပြောပါရစေဗျာ။အာဏာရှင်လက်အောက်တို့ဗမာလူမျိုးတွေမလွတ်မြောက်သောကာလပတ်လုးံ ဒီလိုအဖြစ်ဆိုးတွေကနေဘယ် တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာသေသေချာချာမှတ်ထားကြပါဗျာ...။
သတင်း ပေးပို့ လာသူ အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
စစ်ရေးအရ အရေးယူရင် ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်တို့ အလားတူ တုံ့ပြန်မည်
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း မြန်မာစစ်အစိုးရ သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွေမှာ နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းတဲ့ သတင်းတွေ ဆက်တိုက် ဖော်ပြနေချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင် ခေါင်းဆောင်တဲ့ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီကတော့ အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းရေးကို ထပ်မံ ငြင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်အစိုးရက ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီကို တပတ်အတွင်း နယ်ခြားစောင့်တပ် ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူ့စစ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ တောင်းဆိုထားပြီး လက်မခံရင် စစ်ရေးအရ အရေးယူမယ်လို့ ဖိအားပေးတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ဗွီအိုအေ ထိုင်းအခြေစိုက် သတင်းထောက် ကိုမိုးဇော်က တင်ပြပေးထားပါတယ်။
စစ်ဘက်ရေးရာ လုံခြုံရေးဌာန အကြီးအကဲ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲမြင့်က ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီက ကိုယ်စားလှယ်တွေကို မော်လမြိုင်မြို့က အရှေ့တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်မှာ ခေါ်ယူပြီး တပတ်အတွင်း အသွင်ပြောင်းဖို့အတွက် ဖိအားပေး တောင်းဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီကတော့ ဒီတောင်းဆိုချက်ကို လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်မှူးရင်နုက အခုလို ပြောပါတယ်။
“တပတ်အတွင်း လုပ်ရင်လုပ်၊ မလုပ်ရင်တော့ သူက ဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့ မပြောတတ်ဘူးလေ။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ မလုပ်ဘူးလေ၊ ဘယ်လိုပဲ ပြောပြောပေါ့။ ပြည်သူ့စစ်လည်း မလုပ်ဘူးနော်။ နယ်ခြားစောင့်တပ်လည်း မလုပ်ဘူးပေါ့။”
မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်က သူတို့ တောင်းဆိုတာကို လက်မခံရင် စစ်ရေးအရ ဖိအားပေးပြီး ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီ အခြေစိုက်ရာ ထို့ကော်ကိုးကနေ မောင်းထုတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုတာတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဗိုလ်မှူးရင်နုက စစ်ရေးအရ အရေးယူလာရင် အလားတူ တုံ့ပြန်သွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
“စစ်ရေးအရ အရေးယူလာရင် ကျနော်တို့လည်း အဲဒါယူရမှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒါလည်း တနည်းနည်းနဲ့ တုံ့ပြန်ရမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ ဒီကိုပြန်လာတာကတော့၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လာလုပ်တာကတော့ ကျနော်တို့ ဟိုးအရင်က ခေါင်းဆောင်ကြီး စောဘဦးကြီး မူ ၄ ချက်နဲ့ ပြန်ယူလာတယ်လေ။ အဲဒါပဲ၊ အသေယူထားတာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား။”
ကရင်ခေါင်းဆောင် စောဘဦးကြီးမူ ၄ ချက်ကတော့ လက်နက်ချစကား အလျင်းမပြောရ။ ကရင့်လက်နက် ကရင့်လက်ထဲမှာ ရှိရမည်။ ကရင့်ကံကြမ္မာ ကရင်ဖန်တီးရမည်။ ကရင်ပြည် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ပြီးပြည့်စုံရမည် ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) က တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောလှငွေကလည်း ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီကို စစ်ရေးအရ အရေးယူလာရင် အခြေအနေအရ သူတို့နဲ့အတူ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မကြာမီမှာ ကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲအပေါ် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီရဲ့ သဘောထားကိုတော့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ ဦးတင်မိုသီက အခုလို ပြောဆိုပါတယ်။
“အခုရွေးကောက်ပွဲက လူထုရဲ့ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ရထားတဲ့မဲကို သူတို့ စော်ကားတာပဲ။ NLD ကို အာဏာမအပ်ဘူး။ မအပ်ဘဲ အခုတခါ ထပ်လာပြီးတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လုပ်မယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဘယ်ဟုတ်မလဲ၊ ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီပဲဟာ။ ဘယ်လို ရွေးကောက်ပွဲ ထပ်လုပ်မလဲ။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ သူတို့ ကမ္ဘာကို မျက်လှည့်ပြတာ၊ ဒါပဲရှိတယ်။
“အဲတော့ အခု တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်တွေရော ကျနော်တို့ရော ဘာပြန်လုပ်မလဲဆိုရင် ဒီရွေးကောက်ပွဲ တို့မလိုဘူး။ တို့လိုတာက အရင်ရွေးကောက်ပွဲကို အသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ နိုင်တဲ့ပါတီကို အာဏာအပ်ဖို့၊ ဒါပဲရှိတယ်။”
ဒီနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ကလည်း ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲမြင့်က ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီကို အသွင်ပြောင်း ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက် အလားတူ တောင်းဆိုခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါကို ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်က လက်မခံနိုင်ကြောင်း စာရေးသား ပေးပို့ပြီး ငြင်းဆိုထားခဲ့တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
KNU/KNLA Peace Council ခေါ် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီဟာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်မှာ KNU ကနေ ခွဲထွက်ပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေး ရယူခဲ့တဲ့အဖွဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီက မြန်မာစစ်အစိုးရ ကမ်းလှမ်းတဲ့ နယ်ခြားစောင့်တပ် ဒါမှမဟုတ် ပြည်သူ့စစ် ဖွဲ့စည်းရေးကို အရင်ကလည်း အကြိမ်ကြိမ် ငြင်းဆိုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
လာမယ့် ၂၈ ရက်နေ့မှာတော့ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေး ကောင်စီက အရေးပေါ် အစည်းအဝေးတရပ် ခေါ်ယူထားပြီး မြန်မာစစ်အစိုးရရဲ့ တောင်းဆိုချက် အပေါ်မှာ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီမှာ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေကို နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းဖို့ ဒီရက်ပိုင်းတွေ အတွင်းမှာ ဖိအားပေး တောင်းဆိုနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ပြည် သွေးစည်းညီညွတ်ရေး တပ်မတော် (UWSA)၊ မိုင်းလားအဖွဲ့နဲ့ မွန်ပြည်သစ်ပါတီတို့က အသွင်ပြောင်းရေးကို လက်မခံကြောင်း တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
ဒီရက်ပိုင်းတွေ အတွင်းမှာ တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသား တပ်မတော် (DKBA) နဲ့ ဟောင်သရောဒေသ ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးတပ်ဖွဲ့က နယ်ခြားစောင့်တပ်အဖြစ် အသွင်ပြောင်းတဲ့ သတင်းတွေကို မြန်မာစစ်အစိုးရထုတ် သတင်းစာ မျက်နှာဖုံးတွေမှာ ဦးစားပေး ဖော်ပြထားပါတယ်။
ပျံသန်း ကြမည့် ဂီတ သူရဲကောင်းများ..။
“ လူဆိုသည်မှာ ထင်းပုံကို တည် မီးလိုက်လို့ စား အကြွင်းက ပြာပဲ xxx ခွဲချိန်တန် ခွဲကြရမယ် ဒို့လိုလူတိုင်းပဲ xxx နှုတ်ဆက်ခြင်းရဲ့အစ . . . နှုတ်ဆက်ခြင်းရဲ့အဆုံး xxx တွေ့ဆုံကြုံကွဲ လောကရဲ့ သဘာဝပဲ xxx တွေ့ဆုံကြုံကွဲ လောကရဲ့ သဘာဝပဲ ”
အထက်ပါ သီချင်းစာသားကတော့ တေးရေး - ကိုနေ၀င်း (မောင့်လပြည့်ဝန်း) ၏ နာရေးကူညီ မှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက် ကိုယ်တိုင်ရေးသား၍ သီဆိုပေးထားသော “အိုးထိန်းစက် သံသရာ” အမည်ရှိ တေးသီချင်းဖြစ်သည်။
“ May all be happy
Share my love, peace and harmony
Share your love, peace and harmony.
Let the world will be free. ”
အထက်ပါ သီချင်းစာသားကတော့ မဇ္ဈိမလှိုင်း တေးဂီတအဖွဲ့မှ Bass ဂီတပညာရှင် ကိုရဲလွင် ကိုယ်တိုင် ရေးစပ်သီဆိုပေးထားသော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွက် “SHARE MY LOVE” အမည်ရှိ တေးသီချင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသီချင်းများကို နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သို့ လာရောက်လှူဒါန်းကြသော အလှူရှင် များအား မေတ္တာဖြင့် ပြန်လည်ပေးအပ်သော နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ လုပ်ဆောင်ချက်၊ ပေးဆပ်မှု DVD အခွေများတွင် ထည့်သွင်းကုသိုလ်ယူကြမည် ဖြစ်သည်။ ယခင်က စိုးသိင်္ခ (ရေး/ဆို)၊ မေခလာ၊ နှင်းဧကရီ၊ ကိုစိုးပိုင်၊ မမေရွက်ဝါ၊ အနဂ္ဃ၊ ဂျေမီ၊ ချစ်စိုး၊ ချမ်းအေးဝင်း၊ ချိုချို၊ RT (အာတီ)၊ ဘိုလေးနှင့် ပြည်သာ၊ ဂျီတုန်း၊ သုတ (Cyclone) တို့သည် ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ လက်တွဲပေးဆပ် ခဲ့ကြသော ဂီတပညာရှင် လူမှုရေးသူရဲကောင်းများ ဖြစ်ကြသည်။
ယခု ကိုနေ၀င်းနှင့် ကိုရဲလွင်တို့သည်လည်း ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ အများပြည်သူအတွက် ပေးဆပ်မှုများ၊ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ဖေးမမှုများကို စိတ်ဝင်တစားဖြင့် မိမိတို့ တတ်ကျွမ်းသော ဂီတပညာရပ်ဖြင့် တစ်ဖက်တစ်လမ်း ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလက်တွဲ၍ မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုကျ လူမှုခရီးသွားကြသူများ ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပိုင်းတွင်မက ဂီတအတီး ပညာရှင်များ ဖြစ်ကြသော မဇ္ဈိမလှိုင်းတေးဂီတအဖွဲ့မှ ကိုဇော်မျိုးထွဋ်၊ ယူနီဗာဆယ် စတူဒီယိုမှ ကိုဇော်နှင့်အဖွဲ့ အပြင် ကိုရဲလွင်မှလည်း ကိုနေ၀င်း တေးသီချင်းအား ၀င်ရောက်တီးခတ် ပံ့ပိုးကူညီအားဖြည့် ကုသိုလ် ယူခဲ့ကြသည်။
ဂီတပညာရှင် အများစုတို့သည် လူလူချင်း စာနာစိတ်၊ မေတ္တာစိတ်၊ ဂရုဏစိတ်၊ မုဒိတာစိတ် များရှိကြသော ငြိမ်းချမ်းရေးသမားများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုငြိမ်းချမ်းရေး ဂီတပညာရှင်များနှင့် ကျွန်တော်တို့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် အများပြည်သူတို့အတွက် ပေးဆပ်ရန် အတူ လက်တွဲ ပျံသန်းနေကြပြီ ဖြစ်သည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ မိုးရွာရွာ နေပူပူ
ယနေ့ တစ်နေကုန် ရွာသွန်းနေသော မိုးရေစက်များကြားမှ ဗဟန်းမြို့နယ် မင်းကွန်းတောရ ကျောင်းတိုက်မှ ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇိန္ဒ သက်တော် (၆၄) နှစ်၏ ရုပ်ကလပ်တော်အား နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ အသင်းသားများသည် စတီးရွှေကရ၀ိတ်ဖောင်မှ တစ်ဆင့် ပင့်ဆောင်၍ ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ ကိုယ်တိုင် မောင်းနှင်ပို့ဆောင်မည့် နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်ကာ ရေဝေးသုဿန်တွင် အန္တိမဈာပန အခမ်းအနား ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ ဤသို့ ပို့ဆောင်ရာတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)မှ နိဗ္ဗာန်ယာဉ်အပြင် ဆရာတော်ကြီး၏ ပုံတော်နှင့် ပန်းခြင်းများ တင်ဆောင်ရန်အတွက် အသင်းမှ မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးဖြင့် အသင်းသားများ လိုက်ပါ၍ ရှေ့ပြေးဦးဆောင်ကာ ရေဝေးသုဿန်သို့ ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)သည် မိုးရွာရွာ၊ နေပူပူ၊ အခါကြီးရက်ကြီး ရုံးပိတ်ရက်များတွင်မက တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပိတ်ရက်မရှိ အခမဲ့ ကုသိုလ်ဖြစ် အများပြည်သူတို့အတွက် ထမ်းရွက်ပေးနေရသော၊ ပေးဆပ်ပေးနေရသော ကုသိုလ်ဖြစ် လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ပင် ဖြစ်တော့သည်။
ပေးပို့ ပေးသော ကိုကျော်သူ အားကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်.။
ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းရန်လိုအပ်ဟု ဦးဝင်းတင် ပြောကြား
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲအပေါ်တွင် ပြည့်စုံသည့်တုံ့ပြန်မှု ဖြစ်စေရန်အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရန် လိုအပ်ကြောင်း အန်အယ်လ်ဒီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တဦးဖြစ်သူ ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားသည်။
“ပြည့်စုံတဲ့တုံ့ပြန်မှုဆိုတာ ဒီရွေးကောက်ပွဲက မတရားဘူး။ ဒီရွေးကောက်ပွဲသွားမယ့် လမ်းခရီးကလည်း မှားနေတဲ့ဟာဆို ကျနော်တို့လိုပဲ သပိတ်မှောက်ပေါ့။ ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရမယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
နအဖကောင်စီက ထုတ်ပြန်သည့် ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေများသည် တရားမျှတမှုမရှိသောကြောင့် အန်အယ်လ်ဒီပါတီက ယခုနှစ် မတ်လ (၂၉) ရက်နေ့တွင် ပါတီအနေဖြင့် မှတ်ပုံတင်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး လာမည့် နိုဝင်ဘာ (၇) ရက်တွင် ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သြဂုတ် (၁၉) ရက်တွင် တရားဝင်ထုတ်ဖော်ကြေညာခဲ့သည်။
“ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကိုသွားမယ်။ ဒီဥပဒေဟာ တရားမဲ့တဲ့ ဥပဒေကြီး၊ စစ်အစိုးရ စစ်အာဏာရှင်တွေ အာဏာတည်မြဲဖို့ အသက်သွင်းမယ့် အခြေခံဥပဒေဖြစ်တယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲက ဒီအခြေခံဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်မှာမို့ ကျနော်တို့ကန့်ကွက်တယ်။ တရားမျှတခြင်း နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပြည့်စုံတာ ဘာမှမရှိတဲ့အတွက် ကျနော်တို့ကန့်ကွက်တယ်။ ဒါဆို ကျနော်တို့ပါတီက မှတ်ပုံလည်းမတင်ဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲလည်း မ၀င်ဘူးဆုံးဖြတ်တယ်” ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရာတွင် အပြည့်အစုံမျှော်လင့်၍ မရနိုင်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ပြောဆိုသည်။
“အပြည့်အစုံမျှော်လင့်ပြီး ပြောနေတာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လူထုက ဘယ်ပါနိုင်မလဲ။ ပါနိုင်မှဖြင့် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲကတည်းက၊ အာဏာမလွှဲဘူးဆိုကတည်းက လူထုက အုံကြွပြီးတော့ ပါလာမှာပေါ့။ မပါဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့ သဘောပေါက်ပါတယ်။ မပါဝံ့ဘူး၊ မပါနိုင်ဘူး၊ ပါနိုင်တဲ့အခြေအနေ မရှိဘူး။ ပါနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုး ဖြစ်အောင်လည်း စစ်အစိုးရက ခွင့်မပေးဘူးဆိုတာ ကျနော်တို့သိတယ်။ သို့သော် ဘာပဲပြောပြော ကျနော်တို့က ရုန်းကန်မှုအနေနဲ့၊ ဆန့်ကျင်မှုအနေနဲ့၊ တုံ့ပြန်မှုအနေနဲ့ကတော့ ရှိမယ်လို့ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယနေ့အခြေအနေမှာ လူထုအနေဖြင့် စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်မြဲဆန့်ကျင်နေသော်လည်း လုံလောက်သည့် တုံ့ပြန်မှုမရှိသည့်အတွက်၊ မလုပ်နိုင်သည့်အတွက် စစ်အစိုးရ ဆက်လက်ရှိနေဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ သို့သော် အန်အယ်လ်ဒီက ဆက်လက် ရုန်းကန်ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်နေမည်ဖြစ်ပြီး လူထုအနေဖြင့် ပံ့ပိုးနိုင်သမျှ ပံ့ပိုးမည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်လက်ပြီး “ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ပြည့်စုံတဲ့ အနေအထားရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော် အဲဒါ နောက်ဆုံးမှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုက ဘာလည်းဆိုတော့ အနည်းဆုံး ဒီရွေးကောက်ပွဲကြီးဟာ မတရားဘူး။ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကို စစ်အစိုးရပဲ ဆက်လက်စီးထားမယ်၊ စစ်အစိုးရရဲ့လက်ကိုင်တုတ်ပါတီ ကြံ့ဖွံ့လိုဟာမျိုးကပဲ စီးမယ်ဆိုတာမျိုးတွေ ဖော်ပြနိုင်ရင် ကမ္ဘာကနေ စစ်အစိုးရအပေါ်မှာ ဖိစီးမှုတွေ ပိုပြီးတော့ များသထက် များလာမယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒီလိုဖြစ်တာဟာ တထစ်တရစ်တော့ တိုးသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
ယမန်နေ့ကမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (အန်အယ်လ်ဒီ) ကို မဲပေးလိုသည့် ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် လာမည့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အန်အယ်လ်ဒီ မပါဝင်သဖြင့် မဲမပေးကြရန်သာရှိကြောင်း ၎င်း၏အကျိုးဆောင်ရှေ့နေ အန်အယ်လ်ဒီဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တဦ
းဖြစ်သူ ဦးဉာဏ်ဝင်းမှတဆင့် ပြောကြားခဲ့သည်။
လာမည့်ရွေးကောက်ပွဲတွင် အန်အယ်လ်ဒီ မပါသည့်အတွက် မည်သည့်ပါတီကို မဲပေးရန် မသိရှိတော့ကြောင်း ပြည်သူများ၏ ပြောဆိုချက်အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဖြေကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပြောကြားချက်သည် မှန်ကန်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ထောက်ခံပြောဆိုသည်။
၎င်းက “ဒေါ်စုရဲ့ ပြောဆိုချက်ဟာ အမှန်ဆုံးပဲ။ ဒေါ်စုရဲ့သဘောထားနဲ့ ကျနော်တို့ အန်အယ်လ်ဒီရဲ့သဘောထားဟာ တထပ်တည်းကျတယ်လို့ပဲ ကျနော်တို့ ယူဆတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီကို ထောက်ခံချင်တယ်၊ မဲပေးချင်ကြတယ်။ အန်အယ်လ်ဒီ မရှိတဲ့အခါကျတော့ ဘယ်သူ့မဲပေးရမှန်းမသိဘူး၊ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူး၊ မျက်စိသူငယ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အန်အယ်လ်ဒီမှ မရှိတာ မပေးနဲ့ပေါ့။ အန်အယ်လ်ဒီ လုပ်သလိုလုပ်ပေါ့။ အန်အယ်လ်ဒီကနေ ရွေးကောက်ပွဲ ကျောခိုင်းထားရင် လူထုကလည်း ရွေးကောက်ပွဲကို ကျောခိုင်းရမှာပဲ။ အဲတော့ ဒေါ်စုရဲ့သဘောထားကို ကျနော်တို့ လုံးဝထောက်ခံတယ်။ ထောက်ခံရုံတင်မဟုတ်ဘူး။ ဒီသဘောထားမျိုးဟာလည်း အန်အယ်လ်ဒီမှာ အောက်ခြေအထိ ရှိပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
စစ်အစိုးရပြုလုပ်မည့် ရွေးကောက်ပွဲ မတရားမှန်း နိုင်ငံရေးသမားတိုင်း သိနိုင်သည့်အခြေအနေတွင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် မှတ်ပုံတင်သူအချို့ ပါတီမှနုတ်ထွက်ခြင်း၊ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မပါဝင်တော့ခြင်းတို့မှာလည်း ပြည့်စုံသည့် တုံ့ပြန်မှုမျိုး မဟုတ်ကြောင်း ဦးဝင်းတင်က ပြောဆိုသည်။
“အခု ဥက္ကဋ္ဌတွေ ထွက်ကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မယ် မ၀င်ဘူး ဆိုတာတွေဟာ လုံလောက်တဲ့ စစ်အစိုးရအပေါ် တုံ့ပြန်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ပြည့်စုံတဲ့ တုံ့ပြန်ခြင်းလည်း မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွေ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ နည်းနည်းလေး ထိလာတဲ့အခါမှာ သို့မဟုတ်လည်း ရည်မှန်းချက် မပြည့်စုံတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်မျှသာဖြစ်တယ်။ အဲဒီဟာ ကျနော်တို့ ဘာမှမပြောဘူး” ဟု ဆိုသည်။
သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် မှတ်ပုံတင်ထားသည့် ပါတီများအနေဖြင့် ပါတီများဖျက်သိမ်းပြီး ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်မည်ဆိုပါက ထောက်ခံကြိုဆိုမည်ဟု ဦးဝင်းတင်က ပြောကြားသည်။
ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ ဦးဖြိုးမင်းသိမ်းနှင့် နာယကအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ဦးညိုထွန်းတို့ ပါတီမှနုတ်ထွက်ကာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ယမန်နေ့ကလည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစု (အန်ဒီအက်ဖ်) ပါတီခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေက ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Thursday, August 26, 2010 Links to this post
တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် ရှိဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောလိုက်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေအပေါ် လိမ်လည် လှည့်ဖျားတာမျိုးတွေ မလုပ်သင့်တဲ့ အကြောင်းနဲ့ အတည်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အစိုးရကို သေသေချာချာ လေ့လာသင့်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုသိန်းထိုက်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
အင်္ဂါနေ့တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ NLD ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဘက်က ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောထားတွေကို ပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်အစိုးရက ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်ရက်ကို ကပ်ပြီး ကြေညာတာက ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒကို မလေးစားရာ ရောက်တယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုပါတယ်။ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက် လူတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခွင့်၊ သတင်းတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရယူပိုင်ခွင့်၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းကိုလည်း ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
“ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမယ့်နေ့ကို အချိန်တိုလေးမှာ ကြေညာတာဟာ လုံးဝ မတရားဘူးတဲ့။ သူ့အမြင်ကတော့ ဒါ ပြည်သူတွေကို မလေးစားတာလို့ မြင်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ နောက် Freedom of Expression နဲ့ Freedom of Information သတင်းရယူခွင့်၊ သတင်းထုတ်ပြန်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ မိမိဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခွင့်၊ အဲဒါတွေ မပါဘဲနဲ့ တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘယ်မှာမှ မရှိနိုင်ပါဘူးတဲ့။”
လွတ်လပ်မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခုဖြစ်ဖို့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့် အရေးကြီးတဲ့အကြောင်း ပြောပြတဲ့ တချိန်တည်းမှာပဲ သူနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေ အားထားရတဲ့ သတင်းဌာနတွေ အကြောင်းကိုလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ထည့်သွင်း ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းကို ဦးဉာဏ်ဝင်းက အခုလို ရှင်းပြပါတယ်။
“အခု သတင်းဌာနတွေကနေပြီး ကြားနေရတယ်။ တချို့က ခြိမ်းခြောက်စကား သတင်းစာမှာတွေ့တယ်၊ မီဒီယာမှာတွေ့တယ်။ တချို့က လှည့်ဖျားတဲ့ စကား၊ တချို့ကတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ နားမလည်မှုကို အခွင့်အရေးယူတာ။ ဒါတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့အနေနဲ့ လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူးတဲ့။ နောက်တခုက သတင်းဌာနတခုနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်စုပြောလိုက်တာ ကျနော် ဒီမှာပဲ ပြောလိုက်မယ်။
“ဒေါ်စုက သူ သတင်းတခု ကြားနေတယ်တဲ့၊ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းဌာနဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေး အခြေအနေကြောင့် Funding မှာ ငွေရေးကြေးရေး အခက်အခဲ ရှိတယ်လို့ ကြားတယ်တဲ့။ သူ စိတ်မကောင်းဘူးတဲ့။ ဘီဘီစီရယ် မဟုတ်ဘူး၊ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေ ဒီသတင်းဌာန အားလုံးဟာ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေရော၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် အားကိုးရာပဲတဲ့။ ဒီအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းဘူးဆိုတဲ့ သတင်းကို ပြောလိုက်ပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် မပါဝင်တဲ့အတွက် NLD ကို မဲပေးချင်တဲ့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ ဘာလုပ်သင့်သလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေလည်း မကြာခဏ ထွက်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်း၊ ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားက…
“NLD ကို မဲပေးလိုတယ်၊ NLD မရှိလို့ရှိရင် ဘယ်သူ့ မဲပေးရမလဲ၊ ဘာလုပ်ရမလဲ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ပြောပါတယ်။ NLD ကိုပဲ မဲပေးချင်တယ်၊ NLD မရှိရင် မပေးနဲ့ပေါ့တဲ့၊ ဒါပဲ။ ဒီမေးခွန်းက မကြာခဏလည်း ကြားကြားနေရလို့ပါတဲ့။”
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အခု အတည်ပြုထားတဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နောင် ပေါ်ပေါက်လာမယ့် အစိုးရဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ထိန်းချုပ်နိုင်မယ့် အစိုးရမျိုး မဟုတ်ဘူး ဆိုတာကို ပြည်သူတွေ နားလည်ဖို့၊ လေ့လာဖို့ လိုတယ်လို့လည်း ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။
“လက်ရှိ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ နောင်ဖြစ်လာမယ့် အစိုးရဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ထိန်းကြောင်းနိုင်တဲ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က တည့်မတ်နိုင်တဲ့ အစိုးရ မဟုတ်ဘူးတဲ့။ သမ္မတက လွှမ်းမိုးတဲ့ အစိုးရမျိုး ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေ လေ့လာသင့်ပါတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။”
ဦးဉာဏ်ဝင်း ပြန်ပြောပြခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေဟာ တရားမျှတမှု မရှိဘူး ဆိုပေမဲ့လည်း ဒီ တရားမျှတမှု မရှိတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေကိုတောင် လိုက်နာရဲ့လား ပြည်သူတွေအနေနဲ့ စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတဲ့အကြောင်း၊ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ပုံတွေဟာ ဥပဒေနဲ့ ညီမညီ၊ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုတွေ ကျူးလွန်မှု ရှိမရှိ၊ ဒါတွေကိုလည်း စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြန်ပြောပြပါတယ်။
စာများအား သေချာ ဖတ်မည်ဆိုပါက ကလှစ် နှိပ်ပြီး ကြည့်နိုင် ပါသည်.။
ပေးပို့ ပေးသော မောင်လေး အလင်းဆက် အားကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်.။
စစ်အာဏရှင် ဝန်ကြီးများ သူတို့နေအိမ်များ ပြောင်းရွေ့
၀န်ကြီးချုပ် ဦးသိန်းစိန် နှင့် တခြား ၀န်ကြီးများ ရာထူး စွန့်ပြီး အိမ်စောင့် အစိုးရ ပေါ်ပေါက်လာမည် ဟု သတင်းထွက်နေစဉ်တွင် ထိုဝန်ကြီးများသည် ၎င်းတို့ နေထိုင်ရာ အိမ်များမှ ယခု ရက်ပိုင်းအတွင်း အလျင်စလို ပြောင်းရွှေ့နေကြသည်ဟု နေပြည်တော်မှ လာသော သတင်းများက ဆိုသည်။
ထိုဝန်ကြီးတို့နှင့် နီးစပ်သူ အမည် မဖော်လိုသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီး တစ်ဦးက ထိုသတင်းမှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိ ၀န်ကြီးများ ကြံ့ဖွံ့ ပါတီ အတွက် တရားဝင် မဲဆွယ် စည်းရုံးရေး မတိုင်မီတွင် ရာထူး စွန့်လွှတ်ပြီး အိမ်စောင့် အစိုးရ အဖြစ် ဖွဲ့စည်းမည့် ၀န်ကြီးများ အတွက် နေစရာအိမ်ကို အဆင်သင့် ဖယ်ရှားပေးထားသည့် သဘောဖြစ်သ ည်ဟုလည်း သူက ပြောသည်။
စစ်အစိုးရက နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်နေသည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ၎င်းတို့၏ ပါတီဖြစ်သည့် ကြံ့ဖွံ့က အပြတ် အသတ် အနိုင်ရအောင် ကြိုးပမ်းသည့် တပြိုင်နက်ထဲတွင် အခြား အရပ်သား ပါတီများအား နည်းဥပဒေ မျိုးစုံ ထုတ်ပြီး ကန့်သတ် ချုပ်ချယ်ခြင်း၊ ပါတီဝင်တို့၏ အချက်အလက်များအား ရဲ၊ အက်စ်ဘီတို့က စုံစမ်း စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ကြောက်လန့်စေရန် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်ဟု ရွေးကောက်ပွဲဝင်မည့် နိုင်ငံရေးသမားတို့က ပြောသည်။
နောင်အစိုးရကို လွှတ်တော်က ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြော
၂၀ဝ၈ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ ဥပဒေဟာ သမ္မတစနစ်ကို အခြေခံထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ ဖြစ်နေပြီး အဲဒီ ဖွဲ့စည်းပုံပါ အချက်အလက်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် အစိုးရသစ်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်နိုင် မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ သြဂုတ်လ (၂၄) ရက်နေ့က သူ့ရဲ့ ရှေ့နေတွေဖြစ်တဲ့ ဦးဥာဏ်ဝင်း၊ ဦးကြည်ဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့နဲ့ နေအိမ်မှာ တွေ့ဆုံစဉ် ခုလို ပြောကြားခဲ့တာလို့ ရှေ့နေဦးဥာဏ်ဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
“၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအရ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ အစိုးရဖွဲ့ရင်တောင်မှ အစိုးရအဖွဲ့အပေါ်မှာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ထိန်းကျောင်းတည့်မတ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ မရှိဘူးတဲ့ ဒီဥပဒေအရ ဆိုရင်။ Parliamentary Government မဟုတ်ဘူးဗျာ၊ Presidential Government ဒါကို ပြောတာပါပဲ”
ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ NLD ပါတီက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဘောတူတယ်လို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ပြီး စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ လက်တွေ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေမှာ မတရားတဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှုတွေ ရှိလာရင် ပြည်သူတွေအနေနဲ့ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ထောက်ပြကြဖို့လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားလိုက်တယ်လို့ ရှေ့နေဦးဥာဏ်ဝင်းက RFA ကို ပြောပါတယ်။
NLD ပါတီကိုမှ မဲပေးချင်သူတွေအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မှာကြားရာမှာတော့ NLD ပါတီဟာ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်တော့တာကြောင့် မဲပေးစရာ NLD ပါတီ မရှိဘူးဆိုရင် မဲမပေးပဲ နေနိုင်ကြောင်း မှာကြားတယ်လို့ ရှေ့နေဦးဥာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ရှေ့နေဦးဥာဏ်ဝင်းကို RFA အဖွဲ့သား ဦးဥာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ကျပ်ငွေနှစ်သိန်း ဒဏ်ရိုက်လိုက်ခြင်း
“ကဒေါင်း ”စာလုံးကကြီးပြီး “ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ” စာလုံးကသေးလို့ဒဏ်ငွေ ရသောင်းပါ
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (မြန်မာပြည်) မန္တလေးတိုင်းက ထုတ်ဝေတဲ့ ''ကဒေါင်း ရွေးကောက်ပွဲဂျာနယ်'' မှာ ဖေါ်ပြခဲ့တဲ့ ''ကလိမ်ကကျစ်'' ဆိုတဲ့စကားလုံးကြောင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ စာပေထုတ်ဝေခွင့် စိစစ်ရေးဌာနက ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို ကျပ်ငွေနှစ်သိန်း ဒဏ်ရိုက်လိုက်ပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးသုဝေရှင်းပြရာမှာ တော့ ကြံ့ခိုင်ဖြွံ့ဖိုးရေးအသင်းကနေ ကြံ့ဖွံ့ပါတီ ကို ပြောင်းတဲ့ကိစ္စမှာ သူ့အနေနဲ့ဒါဟာ ကလိမ် ကကျစ်ကျသလို ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောလိုက်တာ ကို စာစောင်ထဲဖေါ်ပြမိတဲ့အတွက် ဒဏ်ရိုက် လိုက်တာလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဂျာနယ်ခေါင်းစီး ''ကဒေါင်း'' စာလုံးက ကြီးနေပြီး၊ ''ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ'' ဆိုတဲ့ စကားလုံးက သေးနေတဲ့အတွက်လည်း ကျပ်ငွေ ၇ သောင်း ဒဏ်တပ်တယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ပထမအကြိမ်ဖြစ်တာရယ်၊ ပါတီမှာလည်းငွေမရှိတာကြောင့် ပါတီကနေ တောင်းပန်လိုက်တဲ့အတွက် ဆိုင်းငံငွေဒဏ် အဖြစ် လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ရပါတယ်။
နောက်တခါ စည်းကမ်းချိုးဖောက်ရင်တော့ အခုဆိုင်းငံ့ဒဏ်ငွေရော၊ နောက်ထပ်ဒဏ်ငွေ ကိုပါ တပေါင်းထဲပေးဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ပြီး ဂျာနယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို မသုံးဖို့သတိပေးခံရတယ်လို့လည်း ဦးသုဝေက ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီစာစောင်ထုတ်ဝေရာမှာ အခုလိုအကန့်အသတ်တွေရှိနေသလို ရိုက်နှိပ်ရေး မှာလည်း နိုင်ငံရေးစာစောင်တွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်ပုံနှိပ်တိုက်တွေက မရိုက်ပေးရဲပဲ ဖြစ်နေ တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီ ခေါင်းဆောင် ဦးခင်မောင်ဆွေ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တော့မည် မဟုတ်
ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်များရဲ့“No Vote” ပြောတာတွေအား မြန်မာပြည် နအဖတို့ ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအခြေအနေနှင့် ဟပ်စပ်နေပါသဖြင့် ပြန်လည်ဆက်စပ်ဖေါ်ပြခြင်း
ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်များရဲ့“No Vote” ပြောတာတွေအား မြန်မာပြည် နအဖတို့ ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေနှင့် ဟပ်စပ်နေပါသဖြင့် ပြန်လည်ဆက်စပ် ဖေါ်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကားခိုးယူမှုများဖြစ်ပေါ်နေ၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ သတိပြုနေရကြောင်း၊
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကားခိုးယူမှုများဖြစ်ပေါ်နေ၍ ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ သတိပြုနေရကြောင်း၊ ခိုးယူခံရသည့် ကားအချို့တွင် အချို့မှာပြန် လည်ရရှိသော်လည်း အများစုမှာ စုံစမ်းဆဲဖြစ်ကြောင်း ခိုးယူခံရသည့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များကဆိုကြသည်။
ခိုးယူခံရသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာရဲစခန်းများတွင် အမှုဖွင့်ထားပြီး ခိုးယူခံရသည့် ကားအမျိုးအစားများထဲတွင် Toyota Corolla CE106 ဗင်ဖင်ကောက် အမျိုးအစားများအပြင် စက်မှုဇုန်ထုတ် ကားများလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
" သြဂုတ်လဆန်းပိုင်းတုန်းက အခိုးခံရတာပါ။ သော့ကတော့ ခတ်ထားတာပေါ့။ ဂျစ်ကားတစ်စီးနဲ့ Toyota Corolla CE106 ဗင်ဖင်ကောက် ၁၉၉၂ အမျိုးအစားတစ်စီး ပါသွားတယ်။ ဂျစ်ကားကတော့ ပြန်ရတယ်။ ဖင်ကောက်တော့ မရသေးဘူးရှာတုန်းပဲ။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်း ကားပါသွားတာ"ဟု ယာဉ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ အတွင်း၌ပင် Townace နှစ်စီးခိုးယူခံခဲ့ရကြောင်း၊ အဆိုပါဖြစ်စဉ်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ "ကျွန်တော် ဒီကားကို လွန်ခဲ့တဲ့ခြောက်လလောက် ကမှ ၀ယ်ထားတာပါ။ ၀ယ်ပြီးကတည်းက ညဘက်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ပွဲရုံရှေ့မှာပဲ ရပ်ထားပါတယ်။ ပွဲရုံထဲမှာက ကုန်တွေနဲ့ပြည့်နေတော့ ကားကို ပွဲရုံရှေ့မှာပဲ ရပ်ထားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကပွဲရုံ ဒုတိယထပ်မှာ အိပ်ပါတယ်။ အခုဖြစ်တဲ့ည (သြဂုတ်လ ၁၆ ရက်)က ကျွန်တော်အပြင်ကပြန်လာပြီး ည ၈ နာရီ ၁၅ မိနစ်လောက် မှာ ကားကို ကျွန်တော်တို့ပွဲရုံရှေ့ မှာပဲ ရပ်ထားခဲ့တယ်။ ညတိုင်းလည်း ဒီနားမှာပဲရပ်တော့ ကျွန်တော်က ကားကိုရပ်ပြီး ကားသော့ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ စတီယာရင်နဲ့ ဘရိတ်ကိုလည်း သော့ခတ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ကျွန်တော်ပွဲရုံပေါ်မှာ တက်အိပ်နေပါတယ်။ မနက်မိုးလင်း (သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်) တော့ ကားက မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီနေ့အထိတော့ စုံစမ်းရှာဖွေနေဆဲပါပဲ။ အရင် နှစ်လ တုန်းကလည်း ရွှေပိတောက်ပွဲရုံရှေ့မှာ တစ်စီး ပျောက်ထားသေးတယ်။ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံထဲမှာ ကျွန်တော့်အစီး နဲ့ဆို လတ်တလော နှစ်စီးပျောက်တာ ပေါ့"ဟု ပျောက်ဆုံးသွားသော ကားပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ကိုဗိုလ်ဗိုလ်ပြည့်က ဆိုပါသည်။အခုချိန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ ကားခိုးမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ကားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုတွေအတွက်လည်း သတိပြုစရာဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်စေပြီး တရားဝင်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမှုတွေကို အချိန်ကာလတိုတစ်ခု တရားဝင်ကြေညာပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်
အဆိုပါစက်မှုဇုန်ထုတ် Townace ကားပျောက်ဆုံးမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဘုရင့်နောင်ရဲစခန်းမှ (ပ)၆၉၄ ဖြင့် အမှုဖွင့် အရေးယူထားကြောင်းလည်း သိရသည်။ ထိုသို့ ပျောက်ဆုံးမှု သတင်းများကြောင့် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ အနေဖြင့် သတိထားရန်လိုအပ်လာပြီး ယာဉ်ပိုင်ရှင်အများစုမှာ သတိထားကာ စောင့်ကြပ်နေကြကြောင်းသိရသည်။
"အခုလို လိုင်စင်မဲ့ကားတွေကို စိစစ်ပြီး တရားဝင်လုပ်ပေးနေတာကို အချိန်ကာလတိုတစ်ခု သတ်မှတ် လုပ်ဆောင်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အခုချိန်မှာဖြစ်ပွားတဲ့ ကားခိုးမှုတွေနဲ့ ဆက်စပ်နိုင်ပါတယ်။ ကားတွေရဲ့ လုံခြုံမှုတွေအတွက်လည်း သတိပြုစရာဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သတ်မှတ်ဒဏ်ကြေး ပေးဆောင်စေပြီး တရားဝင်လိုင်စင် ထုတ်ပေးမှုတွေကို အချိန်ကာလတိုတစ်ခု တရားဝင်ကြေညာပြီး ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်သင့်ပါတယ်"ဟု ကားဈေးကွက် လေ့လာသူတစ်ဦးက ထင်မြင်ချက်ပေးပါသည်။
"ကျွန်တော်တို့က တိုက်ခန်း မှာနေတာဆိုတော့ ကိုယ့်တိုက်ခန်း ရှေ့မှာပဲ ညအိပ်ထိုးတဲ့သူ များတယ်လေ။ ပျောက်တာကလည်း ညဖက်တွေ အပျောက်များတော့ သော့တို့ ဘာတို့သေချာလုပ်နေရတယ်။ လမ်းလုံခြုံဖို့အတွက်လည်း ကင်းစောင့်တဲ့ သူကို စုပြီးငှားထားရတယ်"ဟု လမ်းမတော်မြို့နယ်တွင် နေထိုင်သူ တစ်ဦးကလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။ယခုအခါတွင် ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ သာမက လိုင်စင်မဲ့ကားများကိုဝယ်ယူ၍ လိုင်စင်လျှောက်ထားလိုသူများ အနေဖြင့်လည်း သတိပြုသင့်သည့် အနေအထားရှိလာကြောင်း ယာဉ်ပိုင်ရှင်များ ကလည်း သတိပေးပြောကြားခဲ့ပါသည်။
"ယာဉ်ပိုင်ရှင်တွေတင် ဘယ်က မလည်း without ကားဝယ်ပြီး လိုင်စင်ဝင်မယ့်သူတွေလည်း သတိထား သင့်တယ်။ ရန်ကုန်က ကားကိုခိုး သွားပြီးနယ်ကျမှဈေးအတန်အသင့်နဲ့ without ကားပါဆိုပြီး ရောင်းရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ၀ယ်မိတဲ့သူက လိုင်စင်သွားဝင်တော့မှ ဒါကပျောက်သွားတဲ့ကားကြီးဆိုပြီး ဖြစ်သွားရင် ဒုက္ခများသွားမယ်လေ။ အဲဒီအတွက် သတိထားဖို့ လိုတယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကားပိုင်ရှင်တွေ အများစုကတော့ ကိုယ့် တိုက်ခန်းလေးရှေ့ ကိုယ်ရပ်ရတဲ့သူများ ပါတယ်။ ဒီတော့ ပိုပြီး သတိထားရမှာပေါ့။ သော့ကတော့ လူတိုင်း ခတ်တာပါပဲ"ဟု ယာဉ်ပိုင်ရှင်တစ်ဦး က သုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ဟု eleven ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြပါရှိသည်.။
ကလေးငယ်များနှင့်ပျော်ပါးရန် ခရီးသွားလာ ကြသူများအကြောင်း..
ကလေးငယ်များနှင့် ပျော်ပါးရန် ခရီးသွားလာ နေကြမှုသည် တစ်ကမ္ဘာ လုံးရှိ ကလေးငယ်များ၏ အခွင့်အရေးအတွက် သေရေးရှင်ရေးတမျှ ဖြေရှင်းပေးရမည့် ပြဿနာတစ်ရပ် ဖြစ်နေသည်။ အစိုးရများသည် ပြည်ပ၌ ကလေးများ ပြည်တန်ဆာဖြစ်မှု ကာကွယ်ရေးအတွက် ဥပဒေများ ထုတ်ပြန်ပြဌာန်းရန် ကြိုးပမ်းအား ထုတ်နေသည့်တိုင် ၄င်းနိုင်ငံသားများနှင့် အလည်အပတ် လာရောက်ကြသူများ၏ လိင်မှုဆိုင်ရာ မတော်မတရား ပြုကျင့်မှုများ ဆက်လက်ခံစား နေရဆဲဖြစ်သည်။ ထိုဥပဒေသည် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် အသက် (၁၈)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များနှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ပျော်ပါးသည့် အမေရိကန် နိုင်ငံသားကို ထောင်ဒဏ်အနှစ်(၃ဝ)အထိအပြစ်ပေးရန် ပြဌာန်း ထားသည်။ ကနေဒါနိုင်ငံတွင်လည်း အလားတူပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ကလေး ငယ်များနှင့်ပျော်ပါးမှုသည် တရားမဝင်သောလုပ်ရပ်ဖြစ်ပြီး ရာဇဝတ်မှု မြောက်သည်ဟု ပြဆိုထားသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် ကလေးပြည့်တန်ဆာ ဖြစ်နေသူ (၁.၂)သန်းခန့် ရှိသည်။ ထိုလူကုန်ကူးမှု ဖြစ်စဉ်တွင် သန်း(၁ဝဝ)ခန့် အနည်းဆုံး ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟု အိန္ဒိယနိုင်ငံပြည်ထဲရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အတွင်းဝန်က ထုတ်ဖော် ပြောကြားထားသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်ပွားနေမှု (၉ဝ)ရာခိုင်နှုန်းသည် ပြည်တွင်း လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်နေသည်။ ထိုနိုင်ငံသည် လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်တည်ရာ၊ ကြားခံနေရာနှင့် ဦးတည်ရာ နေရာလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုမှုခင်းသည် လျှို့ ဝှက်ချက်နှင့် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး လုပ်ဆောင် ကျူးလွန်သည့် မှုခင်းဖြစ်သော ကြောင့် ထိုလူကုန်ကူးမှု၏ အတိုင်းအတာကို ခန့်မှန်းရခက်သည်။ မကြာသေးမီ နှစ်များကစပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ တူရှုချက်များ ဖြစ်တည်လာရာ ထိုတူရှုချက်များသည် ဘုရားဖူးလာရောက်သည့် မြို့ကြီးများတွင် ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်း များပြားလာခြင်း၊ လိင်မှုကိစ္စအတွက် ပျော်ပါးရန် ခရီးသွားလာခြင်းနှင့် ကလေးများကို ကာမစိတ် ယိမ်းညွှတ်မှုရှိအောင် လုပ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သို့သော် မကြာသေးမီက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ထိုကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်သည့် ဖမ်းဆီးအရေးယူခြင်းက အရှေ့တောင်အာရှတွင် အထူးသဖြင့် ဖြစ်ပွားလျှက်ရှိသည် ကိုပြသနေသည်။ (၂ဝ၁ဝ)ခုနှစ် ဇူလိုင်လ (၇)ရက်နေ့ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် (၁၄)နှစ်အရွယ် ထိုင်းယောက်ျားကလေး တစ်ဦးကို မုဒိမ်းကျင့်သော (၅၃)နှစ်အရွယ်ရှိ ရုရှားလူမျိုး စန္ဒရားပညာရှင် အကျော်အမော်တစ်ဦး ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခဲ့သည်။ ထိုသူသည် ထောင်အနှစ်(၂ဝ) ကျနိုင်ပြီး ထိုင်းဘတ်ငွေ လေးသောင်း ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ထိုဖြစ်စဉ်မတိုင်မီ နှစ်ပတ်အတွင်းမှာပင် အသက်(၅)နှစ်မှ (၁၂)နှစ်အရွယ် ထိုင်းမိန်းကလေး(၄)ဦးကို ညစ်ညမ်းပုံရိုက်ယူကာ မဖွယ်မရာ ပြုကျင့်သူ အသက်(၉ဝ)နှစ်အရွယ် သြစတေးသျ နိုင်ငံသားတစ်ဦးကိုလည်း ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှ ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ ကနေဒါနိုင်ငံဖွား အမေရိကန်နိုင်ငံသား Glen Richard Allen ကို (၂ဝဝ၇)ခုနှစ် ထိုင်းတရားရုံးတစ်ခုက (၁၁)နှစ်အရွယ် ထိုင်းမိန်းကလေးအား လိင်မှုဆိုင်ရာ အနှောင့်အယှက်ပေးမှု အထောက်အထားများ တွေ့ရှိမှုနှင့် ထောင်ဒဏ် (၁၆)နှစ် ကျခံရန် အပြစ် ပေးခဲ့သည်။ (၂ဝ၁ဝ)ခုနှစ် ဇွန်လစောစောပိုင်းက ၄င်းနေထိုင်ရာ အမေရိကန် တရားရုံးကလည်း အလွန်စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ သူ့အပြုအမူကြောင့် ထပ်မံ တရားစွဲရန် စွဲချက်တင်ထားသည်။ ၄င်းသည် (၁၉၉၇)ခုနှစ်ကတည်းက ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ပတ္တားရားမြို့တွင် သီးသီးသန့်သန့် အခြေချနေထိုင်သူ ဖြစ်သည်။ ၄င်းအားဖမ်းဆီးစဉ်က သူလို ကျူးလွန်ခဲ့သူ နိုင်ငံခြားသား (၃)ဦးနှင့် ၄င်းကိုယ်တိုင် ပါဝင် ရိုက်ကူးထားသော DVD ခွေ(၃ဝဝ)ခန့်ပါ သိမ်းဆည်း ရမိခဲ့သည်။ ထိုခွေများထဲတွင် အသက်(၁၁)နှစ် ထိုင်းမိန်းကလေးများနှင့် လိင်မှုဆိုင်ရာ ပျော်ပါးနေမှုများ ပါဝင်သည်။ ပတ္တားရားမြို့ရှိ ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းတို့တွင် ကလေး ပြည့်တန်ဆာ (၂ဝဝဝ)ခန့် ရှိသည်။ နှစ်စဉ် ထိုလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ရန် ကလေး (၉ဝဝ)ခန့် လာရောက် လုပ်ကိုင်လျှက် ရှိသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံသည် လူကုန်ကူးမှု ဖြစ်ပွားရာ မူရင်းဒေသ၊ ကြားခံနေရာနှင့် ဦးတည်ရာ အရပ်ဒေသလည်း ဖြစ်သည်။ ထိုင်းအမျိုးသမီးများသည် အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ၊ တောင်အာဖရိက၊ ဥရောပ၊ မြောက်အမေရိကနှင့် သြစတျေးလျ နိုင်ငံများတွင် လူကုန်ကူး ခံနေကြရသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံထဲသို့ လာရောက် ပျော်ပါးသူများသည် အရှေ့အာရှ၊ ရုရှားနှင့် ဥရောပတိုက်သားများ ဖြစ်ကြသည်။ နိုင်ငံတကာ ပြစ်မှုကျူးလွန်သည့် ဒုစရိုက်ကွန်ယက်များက ထိုင်းအမျိုးသမီးများကို လူကုန်ကူးမှု ပြုကြသည်။
(၁၉၉၇)ခုနှစ်ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကလေးများနှင့် အမျိုးသမီးများ လူကုန်ကူးခြင်းမှ ကာကွယ်ရေးနှင့် လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဥပဒေပြဌာန်းခဲ့သည်။ ထိုပြဌာန်းချက်တွင် အသက်(၁၅)နှစ်အောက် ကလေးငယ်များအား လိင်မှုဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ပါက ထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်မှ (၁၅)နှစ်အထိ ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ပေးကာ ငွေဒဏ်ပါ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံတွင် ကလေးများလိင်မှုဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခံရသူ သုံးသောင်းခန့် ရှိနေသည်။ အသက်(၅)နှစ်ခန့် ငယ်ရွယ်သူများပင် လိင်ကျွန်ပြု ကျင့်ခြင်းခံနေရသည်။ ထိုနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားမဝင်နေထိုင်သူများသည် ထိုလိင်မှုဆိုင်ရာ အမြတ်ထုတ်ခံရရန် ဆွဲအားကောင်းတစ်ခု ဖြစ်စေသည်။ (၂ဝဝ၄) ခုနှစ်စာရင်းဇယားများအရ ထိုနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည့်တန်ဆာများအားလုံး၏ သုံးပုံတစ်ပုံသည် ကလေးများဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြထားသည်။
မဲခေါင်ဒေသအတွင်း အရှေ့တောင်အာရှ နိုင်ငံများရှိ ပြည့်တန်ဆာများ၏ အသက်များသည် (၁၂)နှစ်မှ (၁၇)နှစ်ကြား ရှိသူများဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကလေးနှစ်သန်းကျော်သည် လိင်လုပ်ငန်းတွင် သားကောင်အဖြစ် စတေးခံနေရသည်။ ထိုကလေးများသည် မိသားစုများ၏ ရောင်းစားခြင်းခံရသူများ၊ မိသားစုဝင်များ၏ အကြွေးကို ပေးဆပ်နေရသူများ၊ မိသားစု အပိုဝင်ငွေရရန် စတေးခံနေရသူများ၊ ပြန်ပေးဆွဲခံရသူများ(သို့) အနိုင်ကျင့်ခံရပြီး ပြည့်တန်ဆာ လုပ်နေရသူများ ဖြစ်ကြသည်။ ထိုကလေးများသည် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်သည့် ရောဂါ ကူးစက်ပြန့်ပွားနိုင်သည့် အခြေအနေမျိုးနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ထိုကလေးများသည် ပြည့်တန်ဆာအဖြစ် လုပ်ရခြင်းအပြင် ၄င်းတို့အသိုင်းအဝိုင်း၏ စွန့်ပစ်ခြင်း၊ ခပ်ခွာခွာ ဆက်ဆံခံရခြင်း တို့ကြောင့် ခိုကိုးရာမဲ့ဘဝအဖြစ်နှင့် နေနေကြရသည်။
ကလေးငယ်များအား ပြည့်တန်ဆာ ပြုမူမှုသည် ကလေးများ၏ အခွင့်အရေးကို စိန်ခေါ်နေသည့် ကလေးလူကုန်ကူးမှု၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ အသွင်သဏ္ဌာန် တစ်ခု ဖြစ်နေသည်။ (၂ဝဝ၉)ခုနှစ် အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဖြစ်ပွားသော လူကုန်ကူးမှုအမှုများတွင် ကယ်တင်ခံရသည့် လူကုန်ကူးခံရသူ (၃ဝ၂)ဦး အနက်မှ ကလေးငယ်များ ပါဝင်မှုသည် ၂ဝ.၅% (၆၂)ဦး ရှိသည်။ အခြားနိုင်ငံများမှ ပြန်လည် လွှဲပြောင်းလက်ခံရသူ (လူကုန်ကူးခြင်းခံခဲ့ရသူ) Victims (၄၃၁)ဦး အနက် ၁ဝ% ခန့် (၄၃)ဦးသည် ကလေးသူငယ်များ ဖြစ်နေသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးသူငယ် လူကုန်ကူးမှုသည်လည်း ယခင်နှစ်များထက် မြန်မာနိုင်ငံတွင် သိသိသာသာ ထင်ရှားလာသည်။ သို့ပါ၍ ကလေးငယ်များ လူကုန်ကူးမှုနှင့် ကလေးများနှင့် ပျော်ပါးလိုသော နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားလာမှုများကို စောင့်ကြည့် ကာကွယ်ရေး အသိပညာပေးမှုများ လိုအပ်နေပြီဟု ဆိုရပေမည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Wednesday, August 25, 2010 Links to this post
ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး လူထုမှာလည်း တာဝန်ရှိ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်း
လာမယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က ပါဝင်ခြင်း မရှိပေမဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လျစ်လျူပြုထားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ အထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို စုံစမ်းမေးမြန်းထားတဲ့ ကိုသားညွန့်ဦးက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ၊ ပြည်သူလူထုတွေက စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ ရွေးကောက်ပွဲကို အာရုံစိုက် သတိထား စောင့်ကြည့်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သတိပေးလိုက်တာလို့ အတော်များများက ယူဆကြပါတယ်။ အထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မနေ့က တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ NLD ပြောခွင့်ရသူ ဦးဉာဏ်ဝင်းကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကို NLD က မျက်နှာလွှဲထားလို့ မရဘူးလို့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်း အခုလို ပြောပါတယ်။
“ကျနော်ပြောတာက အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့ လိုတယ်လို့ မပြောဘူး။ ကျနော်ပြောတဲ့ဟာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲကို မ၀င်ဘူး ဆိုပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို Ignore လုပ်လို့မရဘူး၊ ရွေးကောက်ပွဲကို စိတ်မ၀င်စားလို့ မရဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ကြည့်နေရမယ်လို့ ဒါပဲပြောတာပါ။”
ရွေးကောက်ပွဲက မျှတမှု ရှိဖို့အတွက် အစိုးရတင် မကဘူး၊ ပြည်သူမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲ ခင်ဗျ။
“ပြည်သူနဲ့ ဆိုင်တဲ့ကိစ္စက ပြည်သူမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်၊ ဒါကို ပြောတာပါ။”
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူမရဲ့ အမြင်သဘောထား အတော်များများကို ပြောဆိုထားပေမဲ့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးမှ တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ ဦးဉာဏ်ဝင်းက ပြောပါတယ်။ AFP သတင်းတရပ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲ မျှတမှု ရှိမရှိ လူထုက စောင့်ကြည့်သွားဖို့ လိုတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုတဲ့အကြောင်း ဖော်ပြပါတယ်။
မြန်မာ့အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံအချို့က ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ လေ့လာသူအဖြစ် ပါဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရှေ့နေများကောင်စီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဦးအောင်ထူးကတော့ ဒါဟာ လူထုအနေနဲ့ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လူထုလှုပ်ရှားမှု ပုံစံနဲ့ သွားဖို့ သဘောမျိုး ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
“ကမ္ဘောဒီးယားဆိုရင် အချိုးကျ ကိုယ်စားပြုတဲ့ စနစ်ကို ရွေးချယ် တင်မြှောက်တယ်။ ဒီစနစ်အကြောင်း လူထုသိလာအောင် အကြီးအကျယ် ပညာပေးရေး လုပ်ရတယ်။ အဲဒီလို လုပ်တဲ့ကိစ္စက လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး တရပ်အနေနဲ့ လုပ်တာ ဖြစ်တယ်။ အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် လူတွေက ပိုသိမြင်လာကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲကို ဘယ်လို စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာ နားလည်လာကြတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မသမာမှုတွေ ဘယ်လို ဖော်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာ သိလာကြတယ်။ သတင်းအချက်အလက် ဘယ်လို စုဆောင်းရမယ်ဆိုတာ သိလာကြတယ်။ ဒီလို ၀ိုင်းလုပ်ကြခြင်း အားဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲက လွတ်လပ် တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဖြစ်လာနိုင်ချေကို တဖြည်းဖြည်း သွားတဲ့သဘော ရောက်ပါတယ်။”
အခု မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှိထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေ၊ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့ ခုနပြောတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို လူထုက ဘယ်လိုပါဝင်သင့်သလဲ ဆိုတဲ့ အချက်တွေက ကိုက်ညီနိုင်ပါ့မလား၊ ဥပဒေတွင်းရော ဘောင်ဝင်ရဲ့လား။
“ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရရင်တော့ လုံးဝကို ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေ အကုန်လုံးက လူထုရဲ့ ပါဝင် ပတ်သက်မှုကို စနစ်တကျ ငြင်းဆိုထားလို့ ဖြစ်တယ်။”
ဒါဆိုရင် မျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတရပ်ဖြစ်ဖို့ လူထုက ပါဝင်နိုင်ချေဆိုရင် လူထုအနေနဲ့ ဘာတွေ လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေ ရှိလဲ၊ အခုလို အခြေအနေအောက်မှာ။
“လူထုက ပထမတချက် တောင်းဆိုရမှာကတော့ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဥပဒေတွေကိုက လူထု ရသင့်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ကန့်သတ် ပိတ်ပင်ထားတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ တရပ်မှာ ရှိသင့်တဲ့ လွတ်လပ် မျှတမှု ရနိုင်ဖို့၊ ဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ အနေအထားတွေကို ပိတ်ပင်ထားတယ်။ ပထမဦးဆုံး လူထုလုပ်သင့်တဲ့ အချက်ကတော့ မတရားတဲ့ ဥပဒေတွေကို ပြင်ဖို့ဖြစ်တယ်။”
ဒီရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မယ်လို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်က တနေ့ကပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။ နယ်စပ်အခြေစိုက်တဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်း အတော်များများကလည်း ဒီရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ဖို့ စည်းရုံး လှုံ့ဆော်နေပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲ မျှတမှု ရှိမရှိ စောင့်ကြည့်ပါဆိုတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ စကားနဲ့ အခုလို ရွေးကောက်ပွဲ သပိတ်မှောက်ဖို့ ပြောနေကြတဲ့စကား ကွဲလွဲနေကြသလား စဉ်းစားစရာပါ။ လူ့ဘောင်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်မိုးဇော်ကတော့ မကွဲလွဲဘူး၊ လူထုပါဝင်အောင် လုပ်ဖို့ကိစ္စမှာ တူညီတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
“ကျနော့်အထင်အရ ပြောမယ်ဆိုရင် မလွဲဘူးလို့ ယူဆပါတယ်။ ကျနော်တို့က ဒီရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်သင့်တယ်လို့ တင်ပြခဲ့တယ်။ အခြား မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ နိုင်ငံရေး ပါတီတွေကိုလည်း လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေအရ သပိတ်မှောက်သင့်တယ်လို့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းခဲ့တယ်။ အဲဒီလို ပြောတဲ့အတွက် နအဖက သူ့ဘာသာသူ ဇွတ်အတင်း လုပ်သွားမယ့် ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ ဘာမှ စိတ်မ၀င်စားရတော့ဘူး၊ ကျနော်တို့ အဲဒီလို ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။
“ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဖြစ်စဉ်တလျှောက်လုံးမှာ နအဖက မဟုတ်တာတွေ လုပ်နေတာ ရှိတယ်။ တဘက်စောင်းနင်း လုပ်နေတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ ပြည်သူတွေ အနေနဲ့ မဟုတ်တာကို မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောဖို့ တာဝန်ရှိတယ်။ မဟုတ်တာကို မဟုတ်ဘူးလို့ များများ ပြောလာတာနဲ့ အမျှ သပိတ်မှောက်တဲ့ နိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘာကြောင့် သပိတ်မှောက်ရတယ်ဆိုတာ ပိုပြီးတော့ ထင်ရှားလာမယ်။
“တပြိုင်နက်တည်းမှာလည်း နအဖက အတင်းအဓမ္မ ပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုတာရဲ့ Legitimacy ဆိုတာလည်း ပိုပြီးတော့ ကျဆင်းသွားလိမ့်မယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့ အဲဒီလို နားလည်ကြည့်တယ်။ ဒါ ကျနော့်အမြင်ပါ။ အဓိကကတော့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သော်လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေး အင်အားစုတွေအနေနဲ့ သော်လည်းကောင်း နအဖ မဟုတ်တန်းတရား လုပ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ပြောနိုင်ဖို့၊ ၀ိုင်းဝန်း ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်နိုင်ဖို့က အဓိကကျတယ်၊ ဒီကိစ္စကို အဓိက ဇောင်းပေးတယ်လို့ ကျနော့်အနေနဲ့တော့ အဲဒီလို ယူဆပါတယ်။”
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေရော တိုင်းရင်းသား အင်အားစုတွေမှာပါ အမြင်သဘောထားက အမျိုးမျိုးပါ။ ကိုယ်တိုင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ပြင်နေသူတွေ ရှိသလို ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်ရေး၊ မဲမပေးရေး လှုံ့ဆော်သူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့ လူထုကို ဒီရွေးကောက်ပွဲနဲ့ မျက်ခြည်မပြတ်ကြဖို့၊ နိုင်ငံရေး အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို စိတ်ဝင်တစား ရှိကြဖို့ သတိပေးတဲ့ စကားလို့ ယူဆရပါတယ်။
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက်လက်မျှော်လင့်
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရတဲ့ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူ့ရှေ့နေတွေ ဒီနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရာမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးဟာ ဆန္ဒရှိရင် အချိန်မရွေး လုပ်လို့ရတဲ့ ကိစ္စပါလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေနဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားကို NLD ခေါင်းဆောင်ပိုင်းရဲ့ သဘောထားနဲ့ ညှိပြီး အသိပေးသွားမယ်လို့လည်း ဆိုပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ရှေ့နေကြီး ဦးကြည်ဝင်း၊ ဦးဉာဏ်ဝင်းနဲ့ ဒေါ်ခင်ဌေးကြွယ်တို့ သုံးဦး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နေအိမ်မှာ အချိန်နှစ်နာရီကျော် ဒီကနေ့ တွေ့ဆုံခွင့် ရခဲ့ကြတာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ကိစ္စတွေအကြောင်း ကိုကျော်အောင်လွင်က ရှေ့နေကြီး ဦးဉာဏ်ဝင်းကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးထားပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့ ဒီနေ့ တွေ့ကြတဲ့အခါမှာ အဓိက ပြောဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ရှင်းပြပါခင်ဗျ။ အထူးသဖြင့် လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထား ဘယ်လိုရှိပါလဲ ခင်ဗျ။
“လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေတွေရော၊ ရွေးကောက်ပွဲ အခြေအနေတွေရော အားလုံး ပြောဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်လည်း အရေးကြီးတဲ့ အချက်တွေ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရွေးကောက်ပွဲ တရားမျှတရေးဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်၊ ပြီးတော့ လက်ရှိ နိုင်ငံရေး အခြေအနေပေါ်မှာ ရှုမြင်ချက်တွေကို ပြောပါတယ်။ သို့သော်လည်း အဲဒါတွေကို အဖွဲ့ချုပ် လူကြီးများနဲ့ တွေ့ပြီးတော့ ပြောပြပါ။ အဖွဲ့ချုပ် လူကြီးများရဲ့ ဆန္ဒနဲ့အညီ ထုတ်ပြန်ပါလို့ ကျနော့်ကို ပြောလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒါတွေ အသေးစိတ်တော့ လောလောဆယ် ကျနော် မပြောနိုင်ဘူး။
“လောလောဆယ် ကျနော် ပြောနိုင်တာက အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတာကတော့ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးဆိုတာ စိတ်ဆန္ဒ တကယ်ရှိလို့ရှိရင် အချိန်အခါမရွေး ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်လို့ အဲဒီလို ပြောပါတယ်။”
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ တခြား မှတ်ချက်ပေးတာရော ရှိပါသလားခင်ဗျ။
“ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် တချို့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေက မီဒီယာမှာပြောတာ ကြားတယ်တဲ့။ အဲဒါကတော့ မဲပေးဖို့ ဆန္ဒရှိတဲ့ ပြည်သူလူထုအတွက် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောတယ်တဲ့။ အဲဒီလို တွေးလို့ရှိရင် ၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲက ပြည်သူ့ဆန္ဒကို ဘာမှ ထည့်မပြောရင် ရှေ့နောက် ဘယ်ညီမလဲတဲ့။ အဲဒါ ပြောပါတယ်။”
NLD ခေါင်းဆောင်တွေက ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းတုန်းကပဲ အခုကျင်းပမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို NLD အနေနဲ့ သပိတ်မှောက်တယ်ဆိုပြီး ကြေညာထားပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောကရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲ ခင်ဗျ။
“ကျနော် အဲဒါ မနက်ဖြန်မှ ပြောပါရစေ။ သူပြောလိုက်ပါတယ်၊ ကျနော် လူကြီးတွေကို ပြောဦးမယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အမှုကိစ္စရော ဒီနေ့ ပြောဖြစ်လားခင်ဗျ။
“အမှုကိစ္စလည်း ပြောဖြစ်တယ်။ အမှုကိစ္စကလည်း အမှုက မပေါ်သေး၊ ကျနော်တို့လည်း ရေးပြီးသား စာကြမ်းတွေကို ထပ်ခါထပ်ခါဖတ်၊ ပြင်ဆင်တာတွေ၊ လိုအပ်တဲ့ ဖြည့်စွက်တာတွေကို ကျနော်တို့ ဒီနေ့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။”
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ကျန်းမာရေး အခြေအနေရော ဘယ်လိုရှိပါသလဲခင်ဗျ။
“ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ကောင်းပါတယ်။ ခါတိုင်းလိုပါပဲ၊ တက်တက်ကြွကြွပါပဲ။”
မြန်မာစစ်အစိုးရအပေါ် စစ်ရာဇဝတ်မှု လူမဆန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခြင်းရှိ၊မရှိ ကုလသမဂ္ဂက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တရပ် ဖွဲ့ စစ်ဆေးဖို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ်က အဆိုပြုထားတဲ့ အပေါ် ထောက်ခံသံ ဝေဖန်သံ တွေ ကြားလာနေရပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရ အပေါ် စစ်ရာဇဝတ်နဲ့ လူမဆန်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခြင်းရှိ ၊ မရှိ ကုလသမဂ္ဂက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ဖွဲ့ စစ်မယ်ဆိုရင် အချိန်ကာလ ကန့်သတ်မှု ရှိသလား၊ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ ဥပဒေပညာရှင် ဦးအောင်ထူးက တကမ္ဘာလုံးမှာ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥပဒေအခြေခံမူအရ ပြစ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ရင် အချိန်ကာလ ကန့်သတ်ချက်မရှိဘူးလို့ပြောပါတယ်။
ဘယ်ကာလကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ သက်သေအထောက်အထား ထင်ရှားရင် စစ်ဆေးခွင့်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တကယ်လို့ အဲဒီလိုစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင် ၁၉၇၄ နောက်ပိုင်း ပြစ်မှုတွေ အတွက် ၁၉၇၄ ဖွဲ့စည်းပုံအရ မဆလ အစိုးရလက်အောက်မှာ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ရှိနေတာကြောင့် စစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ရပ်အတွက် အစိုးရမှာသာ တာဝန်ရှိတယ် လို့ ပြောပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး အုပ်ချုပ်လာတဲ့အတွက် ဒီလို ပြစ်မှုတွေအတွက် စစ်တပ်မှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တချိန်တည်းမှာပဲ မီဒီယာတွမှော ဖေါ်ပြနေတဲ့ ၁၉၉၈ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်း ပင်လယ်ပြင်က ခရစ်စတီးကျွန်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှရေဲ့ အမိန့်နဲ့ စစ်တပ်က အရပ်သားတွေကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ကိစ္စဟာ စနစ်တကျ စီစဉ်ပြီး လုပ်တာဖြစ်လို့ Crime against Humanity လူသားဖြစ်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ ရာဇဝတ်မှု မြောက်တယ်လို့ ဦးအောင်ထူးကပြောပါတယ်။
မြေကျွံသောယာဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုကို အလေးထားစို့
ရန်ကုန်မြို့တော်မှာ သက်တမ်း ကြာမြင့်သည့် အဆောက်အအုံ ဟောင်းတွေ ဖြိုချပြီး နေရာ တော်တော်များများမှာ အဆောက်အအုံ အသစ်တွေ ပြန်လည် တည်ဆောက်နေပါသည်။ သို့သော် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းခွင်တွင် တည်ဆောက်နေခိုက် Safety (လုံခြုံမှု) မရှိသော မြင်ကွင်း အနေအထားမျိုးကို တွေ့နေရပါသည်။ အဆောက်အအုံ ဟောင်းကို ဖြိုဖျက်နေတာ၊ အဆောက်အအုံဟောင်းနဲ့ ကပ်လျက်မှာက ဈေးဆိုင်လေးတွေ ဖွင့်ထားသည်။ စားသောက် နေသူတွေက အန္တရာယ် ဖြစ်လာနိုင်တာကို လုံးဝမတွေးထားဘဲ စားမြဲ၊ စကားပြောမြဲနှင့် ရှိလို့နေပါသည်။ အန္တရာယ်မဖြစ်သေးလို့သာပါ။ ဖြစ်လို့ကတော့ မတွေး ဝံ့စရာပါ။ အဆောက်အအုံဟောင်းကိုဖယ်ရှားပြီး အဆောက်အအုံသစ်ကို ပြန်လည်တည် ဆောက်မည်ဆိုလျှင် ပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံမှုက သိပ်အရေးကြီးပါသည်။
အဆောက်အအုံသစ် ပြန်လည်တည်ဆောက်ဖို့လုပ်နေရင်း 'ပိုင်'ရိုက်သည့် မော်တော် ယာဉ်မြေကျွံကျပြီး ဘေးပတ်ဝန်းကျင် လူနေတိုက်ခန်းအိမ်ရှေ့တွင် ခင်းထားသော ကျောက်ပြားများနှင့်မြေကြီးထဲမှာ သွယ်တန်းထားသော ရေပိုက်များ၊ မော်တော်ယာဉ်နှင့်ငြိပြီး တယ်လီဖုန်းကြိုးများ ပြတ်တောက်ပျက်စီးမှုတစ်ခု (၆၊ ၈၊ ၂ဝ၁ဝ) သောကြာနေ့၊ နေ့လယ် (၁)နာရီခန့်မှာ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗိုလ်မြတ်ထွန်းလမ်း၊ အလယ်ဘလောက်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ ထိုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ အိမ်နီးချင်းတစ်ဦးက ဒေါသသံပါပါဖြင့် ယခုလိုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ''တိုက်ဟောင်းကို ...ကုမ္ပဏီက ပြန်ဆောက်တာ။ Safety လုံးဝမရှိဘူး။ 'ပိုင်' ရိုက်တာက နေ့လယ်(၁)နာရီလောက်ကဖြစ်တာ။ 'ပိုင်'ရိုက်တဲ့ကားက ကျွံကျသွားတယ်။
မြေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့ ရေပိုက်တွေအားလုံးပျက်စီးကုန်တယ်။ သူတို့မှာ Safety လုံးဝမရှိတော့ တယ်လီဖုန်းကြိုးတွေလည်း အကုန်ပြတ်ကုန်ပြီ။ တကယ်တမ်းက စည်ပင်သာယာက ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေ။ သူတို့အလုပ်သမားနဲ့သူတို့လာပြီး အားချင်းပြန်လုပ်နေတာ။ အဲဒီကုမ္ပဏီကို ကျွန်တော်တို့ခေါ်ခိုင်းထားတယ်။ ကုမ္ပဏီက သူတို့လုပ်နေတယ်။ သူတို့ လုပ်ပိုင်ခွင့်အတိုင်းလုပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ Righ အတိုင်းလုပ်မယ်။ ဒီကိစ္စက ကန်ထရိုက်နဲ့ဆိုင်တယ်။ အားလုံးပျက်စီးကုန်ပြီ။
ပတ်ဝန်းကျင် သိပ်ဒုက္ခရောက်တယ်'' ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့တွေအနေနှင့် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှု (Safety) တွေကို အလေးမထား ခပ်ပေါ့ပေါ့လုပ်ဆောင်ကြမည်ဆိုလျှင်ဖြင့် ယခုကြုံ တွေ့ခဲ့ရသော ကိစ္စမျိုးတွင်သာမကဘဲယခုထက်အန္တရာယ်ကြီးမားသောကိစ္စများအားကြုံတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လည်း
Posted by မြတ်လေးငုံ at Tuesday, August 24, 2010 Links to this post
နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်တန်ထုတ်ရမည်ဟု ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းပြော
မြန်မာစစ်အစိုးရ အနေနဲ့ နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်သင့်ရင် ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ စက်မှု (၁) ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက နေပြည်တော် သင်တန်းဆင်းပွဲတခုမှာ ပြောဆုိုပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစုိုးရကို နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်နေတယ်လို့ နိုင်ငံခြားမီဒီယာတွေက စွပ်စွဲနေကြောင်း၊ မြောက်ကုိုရီးယားကလည်း သူ့နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးအတွက် သူလုပ်တာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါကြောင့် ကုိုယ့်နိုင်ငံ ကာကွယ်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံကလည်း နျူကလီးယားလက်နက်ကုို ထုတ်သင့်ရင် ထုတ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက် နေပြည်တော် စက်မှု (၁) ဝန်ကြီးဌာန သင်တန်းဆင်းပွဲတခုမှာ ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းက ခုလို ပြောခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရကုို နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်လုပ်ရေးကို လျှို့ဝှက် လုပ်ကုိုင်နေတယ်လို့ သံသယရှိကြောင်း ပြည်ပမီဒီယာမျိုးစုံက ရေးသားပြီး မကြာခင် ဝန်ကြီးဦးအောင်သောင်းက ခုလို တုံ့ပြန် ပြောဆုိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်သောင်းက ဆက်လက်ပြောရာမှာ အထူးသဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံဟာ မြန်မာကုို တပည့်ဖြစ်အောင် သူ့သြဇာခံနိုင်ငံ ဖြစ်အောင် စည်းရုံးနေတယ်လို့ပါ စွပ်စွဲပြောဆုိုကြောင်း သင်တန်း တက်ရောက်ခဲ့သူတဦးက ပြောပြပါတယ်။
အမေရိကန်နိုင်ငံက မြန်မာစစ်အစိုးရကုို ဘယ်လုိုနည်းနဲ့ သြဇာခံနိုင်ငံဖြစ်အောင် စည်းရုံးနေတယ် ဆုိုတာကုိုတော့ ဝန်ကြီး ဦးအောင်သောင်းက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောမသွားပါဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံအပေါ် ၀န်ကြီးဦးအောင်သောင်းရဲ့ စွပ်စွဲပြောဆုိုချက်တွေဟာ ဦးအောင်သောင်းရဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပြောဆုိုချက်လား စစ်အစုိုးရရဲ့ တရားဝင် သဘောထားလား ဆုိုတာကိုလည် တိတိကျကျ မသိရဘူးလို့ ဝန်ထမ်းတွေက ပြောပြပါတယ်။
ပြည်ပမီဒီယာတွေဟာ ခုလိုပဲ စွပ်စွဲ ပြောဆုိုတာတွေ ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်မှာ ၁၂၆ ကြိမ် ရှိခဲ့ပြီး ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ထဲမှာ အကြိမ် ၁၅ဝ ကျော်နိုင်တယ်လို့ပါ ဦးအောင်သောင်းက ပြောခဲ့ပါတယ်။ ခုလို ပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေကို မယုံကြဖို့ ဦးအောင်သောင်းက မှာကြားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
နအဖ စစ်အာဏာရှင်များ မြန်မာပြည်သူများအပေါ်ချေးငွေပေးပြီးလူတွေကိုလိုက်ပြီးစည်းရုံးနေ
ပဲခူးတိုင်း ပေါင်းတည် မှာ မြို့နယ် အဆင့် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဝင် တွေက မြို့အနောက် ဘက်ခြမ်း က ကျေးရွာ တွေကို သွားပြီး လယ်သမား တွေကို ငွေတစ်ရာ နှစ်ကျပ်တိုးနဲ့ ငွေချေးပြီး သူတို့ကို ထောက်ခံမှု ရအောင် စည်းရုံး နေတယ်လို့ လယ်သမားတွေ ပြောပြတာကို ကိုးကားပြီး ဒေသခံ တစ် ယောက်က ဘီဘီစီကို ပြန်ပြော ပါတယ်။
လယ်သမားတွေအနေနဲ့ အခုလို ငွေကြေး ကြပ်တည်းနေချိန်မှာ ရတဲ့ နေရာကနေ ငွေကို ရအောင် ယူပြီး လုပ်ငန်း ကိုင်ငန်းတွေ ဆောင်ရွက်ကြရတာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူကပဲ ဆက်ပြော ပါတယ်။
မြို့ပေါ်မှာတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်ကျော် လောက်ကပဲ ကျန်းမာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မြဦး ကိုယ်တိုင် မြို့သူ မြို့သားတွကေို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှု ဆေးဝါး ကုသမှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ အဲဒီ ဒေသခံကပဲ ပြန်ပြော ပါတယ်။
အဲဒီလို ကုသ ပေးတဲ့ သူတွေ ကိုလည်း သူဟာ ပေါင်းတည် ဇာတိ ဖြစ် တဲ့ အတွက် တရပ်တည်း သားတွေ ကို အခုလို စေတနာ ထား လာရောက် ကူညီပေးတာ ဖြစ်တယ်၊ ပြည်သူ တွေ အနေနဲ့ကလည်း သူ့အပေါ် တုံ့ပြန်ဖို့ ဒေါက်တာ မြဦး က ပြောတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ပေါင်းတည် မဲဆန်ဒနယ် မှာ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီဘက်က ဘယ်သူ ဝင် အရွေးခံမယ်ဆိုတာ ကြေငြာ ထားခြင်း မရှိသေးပေမဲ့ ဒေါက်တာ မြဦးပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ဒေသခံတွကေ ပြောနေကြ ပါတယ်။
ကော်မရှင် အနေနဲ့ ပါတီတောင်းဆိုချက် ပြင်မှာ မဟုတ်
ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီ တချို့က ငွေကြေးနဲ့ အချိန် အခက်အခဲ ရှိနေလို့ အချိန် တိုးပေးဖို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တောင်းဆိုထား တာတွေ ရှိပါတယ်။အကယ်၍ သတ်မှတ်ရက်အမီ အမတ်လောင်းစာရင်း မတင်နိုင်တဲ့ ပါတီတွအေနေနဲ့ ဥပဒေကြောင်းအရ ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်နိုင်သလဲဆိုတာ ပါတီတွေက မေးစရာဖြစ်လာပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့က ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်း ကတော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ ပါတီတွေဘက်က တောင်းဆိုထားတဲ့ အချက်တွေအပေါ် တုန့်ပြန်တာ မတွေ့ရသေးကြောင်း၊သူတို့က ရွေးကောက်ပွဲ ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေ ပြဌါန်းသတ်မှတ်ထားကြောင်း၊ အဲဒီဥပဒေကိုပြင်ရမယ်ဆိုရင်ကော ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ပြင်ပါ့မလားဆိုတာ စဉ်းစားစရာ ဘဲလို့ဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အနေနဲ့ တောင်းဆိုချက်တွကေို လိုက်လျော ပြင်ဆင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ သူမထင်ကြောင်း၊ သူတို့က နဂိုရ်ကတည်းက အချိန်ဇယားအတိုင်း ချမှတ်ပြီး ၊ ပါတီတွေကလည်း ကိုယ့်အခွင့်အရေးအရ အခက်အခဲတွေ တင်ပြနေကြတာပဲဖြစ်တာတွေ့ရတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း အစိုးရကိုယ်တိုင်က ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကို သူ့ ပါတီအနေနဲ့ ဝင်ပြိုင်မှာဖြစ်တာမို့ ဝင်ပြိုင်မယ့်သူနည်းလေလေ သူ့အတွက် ကောင်းလေလို့ တွက်ချက်မှာဖြစ်ကြောင်း ဒါကြောင့်မို့ပြဌါန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကိုတော့ ပြင်ပေးလိမ့်မယ်လို့ သူမထင်ကြောင်း ရှေ့နေကြီး ဦးအောင်သိန်းက ဘီဘီစီကိုပြောပါတယ်။
အားလုံးကိုခြုံကြည့်ရင် ပေါက်ပင် ဘာကြောင့်ကိုင်းရတယ် ဆိုတာလို ဥပဒေတွဟော တရားမျှတမှု ဘယ်လောက်ရှိလဲ ဆိုတဲ့ အချက် ပေါ်မှာဘဲ ပါတီတွေအနေနဲ့ ရပ်တည်သွားဖို့ လိုတယ်လို့ လက်ရှိ ပါတီတွရေဲ့ အခက်အခဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ ရှေ့နေကြီး ဦအောင်သိန်းက သုံးသပ်သွားပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံအကျဉ်းသားများနေ့ ဘာကြောင့် ကျင်းပသင့်...
စစ်အစိုးရ ရာဇသံကို ကချင်ပြည် လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ KIO...
နအဖတပ်ခေါင်းဆောင် များ စစ်ရာထူးစွန့် NLD ပါတီရဲ့ ဒ...
စစ်တပ်က အရာရှိကြီးတွေ နုတ်ထွက်တယ်၊ ရာထူး အပြောင်းအ...
နအဖ စစ်အာဏာရှင် ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်များ အပြောင်းအ...
ပြိုင်ဘက်မရှိုစစ်အာဏာရှင် သက်သက် ဝင်ပြိုင်မယ့် ၂၀...
၂၀၁၀ နိုဝင်ဘာလတွင် ပြုလုပ်မည့် နအဖ စစ်အာဏာရှင် မျ...
တပ်ခရိုင် မဲ့ကဆာရွာနှင့် နန်တီရွာအကြားမှ မြန်မာအမျ...
စစ်ရေးအရ အရေးယူရင် ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်တို့ အလားတူ ...
တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲတခု ပေါ်ပေါက်ဖို့အတွက် သတင်...
စစ်အာဏရှင် ဝန်ကြီးများ သူတို့နေအိမ်များ ပြောင်းရွေ...
နောင်အစိုးရကို လွှတ်တော်က ထိန်းချုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်ေ...
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကို စာပေစိစစ်ရေးဌာနက ကျပ်ငွေနှစ်သိ...
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အင်အားစု NDF ပါတီ ခေါင်းဆောင်...
ကမ္ဘာကျော် အနုပညာရှင်များရဲ့“No Vote” ပြောတာတွေအာ...
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း ကားခိုးယူမှုများဖြစ်ပေါ်နေ၍ ယာဉ်...
ကလေးငယ်များနှင့်ပျော်ပါးရန် ခရီးသွားလာ ကြသူများအြေ...
ရွေးကောက်ပွဲ စောင့်ကြည့်ရေး လူထုမှာလည်း တာဝန်ရှိ၊ ...
အမျိုးသား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆက...
မြေကျွံသောယာဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်လုံခြုံမှုကို အလေးထ...
နျူကလီးယားလက်နက် ထုတ်တန်ထုတ်ရမည်ဟု ဝန်ကြီးဦးအောင်...
နအဖ စစ်အာဏာရှင်များ မြန်မာပြည်သူများအပေါ်ချေးငွေပေး...
ကော်မရှင် အနေနဲ့ ပါတီတောင်းဆိုချက် ပြင်မှာ မဟုတ်...
ဥပဒေ ချိန်ခွင်ပေါ် က ရွေးကောက်ပွဲ
နအဖတွေ လုပ်မယ့် ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲက လူမလဲဘဲ အင်္ကျီသ...
ရွေးကောက်ပွဲကို ပြည်တွင်းပြည်ပ သပိတ်မှောက်ဖို့ဆုံး...
ရဲမွန် တပ်ရင်း တွေနဲ့ လာလဲတဲ့ တပ်တွေကြား ရဲမွန်တပ်...
၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲ ပါတီတွေ အမတ်စာရင်းတင်ဘို့ အခက်တွေ...
နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့တွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန...
ရန်ကုန်တိုင်း စုပေါင်းရုံးမှ ဌာနအချို့ ပြည်လမ်းမပေ...
ဇာတ်လမ်းရေးကြရာမှာ ယုတ္တိယုတ္တာ ရှိကြပါစေ
နိုင်ငံရေးပါတီ ထုတ်ဝေခွင့် မှတ်ပုံမတင်ရသေးသော နိုင...